Shaqada Dibadda ee Dubai 【Raadi oo Dalbatid Fasaxyada Imaaraadku Ka Bixiyo】
Shaqada Dibedda ee Dubai - Raadi oo Dalbo Boosaska UAE
Shaqooyinka suuq-geynta ee Dubai
Published by Shirkadda Dubai City at January 20, 2018
Ka shaqeyso dibadda Dubai
Fiiri Shaqaalaha Wakiilada Caalamiga ah!
Dibadda Shaqada Dubai la Dubai City Shirkadda. Fiiri Shaqaalaha Cusub ee Cusub adduunka oo dhan. Waxaan bixinaynaa caawimaad raadinta shaqooyinka banaan ee UAE. Haddii aad raadineysid in lagu shaqaaleysiiyo Dubai. Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawino sidii aad shaqo uga heli lahayd UAE. Waxaan nahay kaa caawinaya inaad shaqo ka hesho Dubai. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa fiiri adeegyadayada adeegyadda qorista.
Kooxdayada shaqaaleysiinta ayaa shaqaalaysiinaya shaqooyin banaan oo banaan oo ku yaalla UAE. Ka shaqeeya dibedda Dubai, tani waa waxa qof kastaa rabo waana aanu nahay halkan si aad uga caawiso inaad shaqo ka hesho Dubai City. Qof kasta oo ugaarsade caalami ah xaqiiqdii wuxuu fursad u leeyahay inuu ka shaqeeyo Dubai. Shirkadda Dubai City waxay gacan ka geysaneysaa helitaanka shaqooyinka ugu fiican ee ka jira Dubai iyo Abu Dhabi. Laakiin ka hor intaadan xitaa u dhaqaaqin caasimadda Imaaraadka Carabta Emirates. Fadlan booqo hagaha dadka shaqo doonka ah. Waxaad u baahan doontaa inaad hayso macluumaad yar oo ku saabsan gacanta si aad shaqo ugu hesho Dubai.
Waxaan raadineynaa dad aan caadi ahayn oo awood u leh in ay noo shaqeeyaan. Waxaan mar walba ku jirnaa raadinta dadka shakhsiyaadka dhalaalaya, hibo leh oo raaxo leh. Ma tahay shaqo raadin Dubai?. Waxaan shaqaaleysiineynaa dhawr boos oo Dubai ah. Isla mar ahaantaana, Fursadaha Xirfadda iyo Shaqooyinka ee Magaalada Dubai way kuu furan yihiin. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan nahay shirkadda Dubai City iyo sawir ahaan. Waxaan nahay shirkad horay loo qoro goobta shaqada ee Imaaraadka. Waxaan raadineynaa shaqaaleyaal xirfadleyaal ah. Si aad dibadda uga shaqeyso adigoon khibrad lahayn Taasi maaha arin.
Soo dejinta dib u dajinta shaqooyinka dibada ee UAE
Guud ahaan, waxaan jecel nahay inaan kuugu dejinno shaqooyin cusub Dubai.
Shirkadda Dubai City ayaa bixisa talo mustaqbalkiisa. Barnaamijyadayada shaqo raadinta iyo Siyaabo aad ku iibsan karto naftaada Dubai. U samee hab cusub oo loogu talagalay dadka qurbaha ku nool ee UAE. Haddii aad ka timi dibadda oo aad sugeyso inaad shaqo hesho. Shirkadkayagu si dhab ah ayay kuu tahay. Sida xaqiiqda ah, shirkadaha Emirates waxay kireystaan ​​dhammaan Bariga Dhexe. Oo waxaan nahay mid ka mid ah bixiyeyaasha shaqo ee ugu fiican a Xirfadaha Dubai iyo Abu Dhabi.
Ka shaqeyso dibadda Dubai loogu talagalay qarashyada
Meesha ugu wanaagsan ee shaqada Bariga Dhexe ee Dubay. Xaqiiqo ahaan waa run haddii aadan sameynin hmaaddaama helitaanka Xirfadaha Caalamiga ah ee Hoteelka Maamulka UAE. Shirkaddayadu way ku caawin kartaa shaqo hel gudahood 60 maalmood gudahood. In kasta oo ay tani noqon karto gelinta resume run ah. Shirkadeena oo ah xubin qaali ah ayaa kugu siin doonta guddiga loo shaqeeyaha Bariga Dhexe.
Ka shaqeyso dibadda Dubai - Waxaan ku shaqaaleysiin doonnaa Dubai City!
Soo dir Resume shaqada ee Dubai
Fadlan nala wadaag bogga internetka si ay u caawiyaan dadka kale!
Nagala soo Galaan Waxaan Shaqaaleyneynaa Dubai!
Waxaan sugeynaa dib uhabeyntaada Ka shaqeyso dibadda Dubai. Waan rabnaa jacaylka kaa caawiya inaad shaqo ku hesho UAE. Si kastaba ha noqotee, kuma qasbi karno shirkadaha kale inay ku siiyaan shaqo riyadeed. Laakiin hadaan ku caawin karno waxaan xaqiiqdii kuu qaban karnaa. Hadafkayaga shaqo doonka caalamiga ah waa inaanu jecel Dubai. Khabiirka shaqaalaynta ayaa kaa caawin kara tan tan. Gaar ahaan haddii aad tahay qof shaqo doon ah oo Hindi ah. Shirkadaha Dubai ayaa sugaya inay ku shaqaaleeyaan.
Ujeedada ku caawinaysa. Haddii aan fursad u helno in qoraalladu ay ku shaqaaleeyaan. Kooxdayada shaqaaleynta waxay ku dadaaleysaa inay hubiso. Shirkadda Dubai City waa inay kaa caawiso inad shaqaaleysid. Shirkaddayada shaqaaleysiinta ayaa gacan ka geysaneysa shaqaale badan oo shaqo doon ah si ay u helaan Shaqada Dibadda ee Dubai. Gaar ahaan haddii aad ka timid South Africa. Xitaa Shaqaale Pakistani ah oo shaqo raadin nala siiyay.
Ku saabsan maalmaha 60 Ka shaqeyso dibadda Dubai - waa waqtigii aan u baahannahay si ay kuu siiyaan shaqooyinka bannaan ee Dubai. Si aad uhesho qaab kale, adeegga raadinta xirfadlaha waa geedi socod dheer - Haa waa run aad u baahan tahay inaad xoogga saarto Linkedin iyo kuwa kale goobaha shaqada. Muhiim u ah in la isku dayo in lala xiriiriyo maamulayaasha HR oo dheeraad ah iyo qorayaasha. Tag LinkedIn oo isku day inaad soo rogo faylka isku xirka iyo inta badan. Ilaa aad ka gaarto dhammaan dadka qora Dubai. Kani waa habka kaliya ee hadda ee shaqo raadinta waanan ku caawin karnaa.
Waxaan shaqaaleysiineynaa qurbajooga Emirates Jobs ee Dubai
Miyaad shaqo ka raadineysaa Dubai? Shirkaddayada, waxaad ka heli kartaa shaqo degdeg ah. Kooxdayada shaqaaleysiinta ayaa halkan u jooga Waxay kaa caawineysaa inaad hesho xirfad aad u fiican ee Abu Dhabi, sida aynu nahay Shirkadda Dubai City waxay raadineysaa xirfad waa dhiig. Dhinaca wanaagsan dhinaca shaqo raadinta ee Emirates oo leh shirkadda Dubai City waa sahlan tahay. Falanqaynta ugu dambaysa, riix sawirka hoose iyo la xiriir shirkada Emirates.
Shaqada Dibada ee Dubai ee Expats waxay noqon kartaa adigaa!
Shaqooyinka Emirates - Waxaad shaqo ku heli kartaa Emirates. Ma tahay raadinta fursado shaqo oo aad u fiican Dubai?. Sida xaqiiqda ah, qofkasta oo ka soo jeeda Dubai wuxuu raadinayaa meel banaan oo laga soo bilaabo maalinta 1aad marka ay soo degaan. Sidaa darteed waxaan halkan u joognaa inaan kaa caawinno raadintaada shaqo. Shirkadaha ka mid ah kuwa aad ka fiirsan kartid shaqo raadinta waa Emirates. Waxaa jira xitaa dukaamada Emirates, dabcan, waad ku duubi kartaa helitaanka shaqooyin banaan oo ay la leeyihiin UAE.
Waxaan ku shaqaaleyneynaa shaqo doonayaasha xirfad ku leh Dubai
Miyaad raadineysaa a Xirfadda Dubai? Waqtiga xaadirka ah, waxaad ka heli kartaa shaqo kuwada kafeega Starbucks. Si aan u dhigno qaab kale, waxaan jecel nahay inaan caawino xitaa Websaydhyada Imaaraatka Gacanka. Rajo inaad jeceshahay inaad ka shaqeyso shirkadaha Emirates. Sababtoo ah waxaad ka heshaa xirfad aad u fiican Dubai ama Abu Dhabi.
Shirkadda Dubai City waxay raadineysaa musharixiin cusub inay ku biiraan koox xirfad ku leh Gacanka. Meelaynta Shaqooyinka Imaaraadku waxay ku jirtaa dhiigayaga Carabiga. Waqtigaaga ha dhumin oo runti shaqo ha naga helin. Hadaad raadineysid Shaqooyinka beeraha waxaad sidoo kale u diri kartaa Resume shirkadeena. Shaqada Dibedda ee Dubai hadda waa safaarado.
Waxaa jira fursado dhowr ah oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ee caalamiga ah ee UAE. Waxaan muujineynaa shaqo raadiye sida shaqo loo helo Dubai. Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawinno inaad noqoto kumeelgaadhka United Arab Emirates. Shirkadda Dubai City waxay ka caawineysaa kharashyada cusub ee Hindiya iyo Pakistan sidii ay shaqo ku heli lahaayeen.
Waxaannu raadineynaa haweenay haween ah oo ku sugan Imaaraadka
Ma jeclaan lahayd inaad ka shaqeyso BP? Sababtan awgeed, waxaan si joogto ah u cusbooneysiineynaa goobta shaqada. Waxaan sugeynaa loogu talagalay dumarka cusub ee dumarka ah iyo kuwa ajnabiga ah. Si aan u tilmaanno waxaan raadineynaa Koonfur Afrika, wadajir Indian qurbo-joogga doonaya inay shaqo ka bilaabaan Dubai. Shirkadeena, qof walba wuxuu fursad u leeyahay inuu ka shaqeeyo Batroolka Ingiriiska. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad noo soo dirto CV. Cinwaanka emaylka waxaa lagu bixiyaa dusha bogga.
Imaaraadka Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican haweenka qurbaha. Dhibaato muxuu jinsiyad ahaan u leeyahay haweenay u dhalatay, Dubai iyo Abu Dhabi waxay u shaqeeyaan shaqo. Gaar ahaan Aagga Magaalada Dubai waxaa loogu talagalay haweenka uurka leh. Waqtigan xaadirka ah meesha ugu caansan ee loogu talagalay maareeyayaasha haweenka. Ma yihiin shaqooyin huteel oo ku yaal Dubai waxa aad ka heli kartaa shaqo meelo dhawr ah. Laga soo bilaabo shaqada aasaasiga ah ee gabadh ahaan ilaa hudheelka fuliyaasha sare Tababaraha kooxda shaqooyinka banaan.
Shaqaale cusub oo cusub ayaa bilaabay isticmaalka mobile ee Dubai
Xilliga cusub ee shaqo raadinta iyo Shaqada Dibadda ee Dubai ayaa timid. Waxaad awoodi kartaa shaqo ka raadso taleefanada Imaaraadka Carabta. Hadda on telefoonka gacanta, wax walba waad sameyn kartaa. Tusaale ahaan, waad u istcimaali kartaa qalabkaaga 'android' si aad u hesho gelitaanno shaqo oo cusub. Bilow inaad u dirto CV-ga dhammaan Imaaraatka isla hal guji. Waxaa intaa dheer, waad awoodaa hadda ku biir Dubai. Shaqaalaha cusub ee shaqo doonka ee Dubai. Taleefanka gacanta waa mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee suurtogalka ah.
Hadda xitaa Google ayaa shaqaaleyneysa codsiyada telefoonka gacanta. Markaad maskaxdaada ku jirto, waa inaad tixgelisaa suuq-geynta telefoonka gacanta. Tusaale ahaan, waxaad kala hadli kartaa wakiillada shirkadaha badan. Shirkaddayadu sidoo kale waxay samaysay adeegyo badan. Tusaale ahaan mid ka mid ah waa Shabakadda Dubay ee Gobolka Gacanka. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa ku biiri kooxdeena oo waxaan kuu soo diri karnaa CV-ga cusbooneysiinta.
Shaqada Dibadda ee Dubai ee Fikradaha.
Waxaan shaqaaleysiineynaa Automotive ee Bariga Dhexe
Dhinaca kale, haddii aad raadineyso xirfad gaar ah Dubai waan ku caawin karnaa. Sababtan awgeed, boggan ayaan sameynay. Sida kor ku xusan, kooxdayada ayaa badanaa cusbooneysiiya shaqooyinka cusub ee bannaan. Shirkadaha Dubai waxay sugayaan musharixiin cusub oo caalami ah. Inta badan, waxaan nahay hadda waxay u qortey Audi ee Bariga Dhexe.
Hadaf, haddii aad khibrad u leedahay Hindiya ama Koonfur Afrika aad ka badan tahay soo dhoweyn. Dhinaca kale, musharrixiinteena cusub ee doonaya in ay shaqo bilaabaan Dubai. Sida iska cad waxay dalban kartaa resume cusbooneysi ah. Fadlan sidoo kale u soo dir warqad dabooli ah shirkadeena.
Maalmahanba qof kasta oo ajnabi ah wuxuu leeyahay fursad uu ku shaqeeyo dibadda ee Dubai iyo hel iyo Codso shaqooyinka bannaan ee ku yaalla UAE. Qof walba waxaa lagu martiqaaday in uu soo rogo resume. Weligaa ma waxaad fursad u leedahay inaad ka shaqeyso Automotive Industry? Fadlan u soo dir miiskaaga maamulayaasha shaqaaleynta. Sidoo kale waxaanu haysanaa shaqooyin banaan oo kale oo loo heli karo shaqaale caalami ah.
Ka shaqeeya Dubai dibna ula soco batroolka
Maaha Kaliya Wakiilada Shaqaalaha Caalamiga ah
Waxaad ka heli kartaa shaqo Dubai ku leh Warshadaha Batroolka iyo Gaaska. Waaxdani waa koritaan qeexan ganacsi gudaha Imaaraadka. Tusaale ahaan, waxaad ka bilaabi kartaa ka shaqeynta dibada Dubia iyo Abu Dhabi. Gaar ahaan shirkadaha ku sugan Abu Dhabi waxay qortaan musharrixiinta shirkadaha batroolka ee Qatar iyo Abu Dhabi. Dhinaca kale, meelaha ugu caansan hel shirkadaha shaqada waa Sacuudi Carabiya. Qurbajoogta iyo shaqo doonka ka yimid adduunka oo idil ayaa jecel tan meel.
Fikrad kale oo caqli ah in la helo shaqo waa in la helo wareysiga socodka ee Dubai. Waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee loola xidhiidhi karo dadka madaxda ah gudaha gudaha UAE. Iyo sida ay u raadinayso shirkadaha ugu fiican ee Dubai City. Dadka shaqo doonka ah waa inaad u fiirsataa maxaa yeelay badi shirkadaha Bariga Dhexe. Waxaan hadda ka caawineynaa sidii aan ku heli laheyn shaqooyinka Qatar Petroleum, Dubia iyo Abu Dhabi Shirkadaha Shidaalka. Hadafkayagu waa inaanu maanta kugu xidhno shaqo-bixiyeyaasha.
Shaqooyinka Dubai oo loogu tala galay Filipino Expats
Shirkadda Dubai City ayaa sidoo kale ka caawisa shaqooyinka bannaan ee ka shaqeeya UAE. Haddii aad raadineysid in lagaa kiraysto shirkadaha Dubai. Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino. Waqtiga dheer, marka aad ku biirto shirkad waxaad ka heli kartaa boos banaan oo cusub Dubai. Waxaan shaqaaleysiineynaa dhowr boos oo banaan oo ka jira UAE. Waxaad awoodi kartaa ka shaqeeya dibadda Dubai sida Filibiin magaalada Dubai waxay soo kireysteen dad ajaanib ah.
Tani waa ta keentay in muhaajiriinta ku sugan Dubai ay u guuraan. Shirkaddayada shaqaalaysiinta ee UAE ayaa caawinaya Filibiin expats. Xaqiiqdi, waxay kaa caawineysaa inaad shaqo ka hesho magaalada Dubai adigoo u shaqeeya Filibiin. Qof kasta oo shaqo doon ah oo caalami ah, marka la soo koobo, wuxuu leeyahay fursad u gaar ah oo uu kaga shaqeeyo Dubai. Tusaale ahaan, waxaan hada nahay shaqaaleynta macalimiinta ee Dubai. Sababta oo ah Bariga Dhexe waa meelo badan oo banaan oo loogu talagalay dadka ajnabiga ah.
Sida xaqiiqda ah, waxaan sugeynaa ee loogu talagalay musharraxiinta leh waxbarashada tacliinta sare. Sababtoo ah Dubai ayaa aad u qiimo badan. Musharaxa tacliinta sare ee aanu hayno. Taasi waxay noqon doontaa mid aad u sahlan in aan ku meeleyno.
Adeegyada Raadinta Shaqada ee Premium Job in Dubai?
Inta badan caddaymaha adag ee ah in Dubai ay tahay waxa ugu fiican waa mushaarka ugu sarreeya. Ha ka walaacin CV-gaaga fadlan noo soo dir maanta. Kooxdayada ayaa hubaal kaaga caawin doonta inaad bilowdo shaqo raadinta si cad uga dhex muuqata Emirates. Waxaa la yaab leh tan waxaa la siin karaa maalmaha 60. Waxaan ka caawinaynaa dhowr waddan oo caalami ah in lagu meeleeyo UAE.
Waqtiga fog, waxaan nahay habka kaliya ee loogu talagalay shaqo raadintaada ee UAE sida shaqo doonka Hindiya. Maxaynu u bixinnay maalmaha 60? Waxaanu ku tusi doonnaa habka shaqo raadinta. Waxaan awoodnaa inaan kuugu xirno maamulayaasha shaqaaleynta. Sida lagu xusay oo kaliya in la sugo is-bedelada is-gaadhsiinta oo buuxa. Oo noqo shaqaale mutadawiciin ah oo Dubai ku nool.
Waxaan nahay shirkadda kaliya ee suuqa oo aan xakamayn shaqa doonka. Waxaan dooneynaa kaliya inaan ka caawinno dadka inay shaqo riyo ah ku qaataan Dubai. Hase yeeshee, xaalad ah inaanaan caawino musharixiinta. Waxaan kuugu soo direynaa lacagtaada xisaabtaada. Guud ahaan, kooxdayadu waxay kaa caawineysaa Shaqada Dibedda Dubai.
Yaa, Maxaa, Maxaa, Goorma, Xaggee?
Dubai Sida Dhamaan Shaqada - Dhammaan Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Dubay, waa waddankii labaad ee Isutagga Imaaraadka Carabta (UAE) marka la eego cabir ahaan, Dubai, waa xudunta dhaqaalaha adduunka. Dad badan ayaa ku hamiyaya inay shaqooyin ka raadsadaan aaga inta badan faa iidooyinka ay ka heli karaan halkan oo ay ku jiraan mushaharka wanaagsan, dhaqanka shaqada weyn, qaab nololeedka raaxada, daqliga canshuur la’aanta iyo muuqaalkiisa xiisaha leh. Waxay ka mid tahay dawladaha xorta ah ee caan ku ah heerarkeeda horumarineed ee sarreeya. Xitaa waa suurtagal in duulimaadyadu ku yeeshaan hanti ay ku leeyihiin gobolka boqortooyada Dubai, si ka duwan ummadaha kale ee ku yaal Bariga Dhexe. Taasi waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu sarreeya ee shaqo doonka adduunka oo dhan si ay shaqo uga raadsadaan gobolkaan.
Qaybaha kala duwan ee shaqada ee Dubai
Inta badan waddamada bariga bariga dhexe waxay ku tiirsan yihiin kaliya saliida inay tahay udub dhexaadka dhaqaalahooda. Laakiin waxyaabaha Dubai u yaal way kala duwan yihiin. Waxbadan oo kale warshadaha ayaa hadda ku soo kordhaya Dubai, soo jiidashada shaqo doonka ka yimid India, Pakistan, Bangladesh iyo qaybo kale oo badan oo Aasiya ka mid ah si ay uga shaqeeyaan qaybaha sii kordhaya. Warshadaha ugu waaweyn ee aan ka aheyn saliida iyo gaaska ee hada ku kobcaya Dubai waxaa kamid ah dalxiis, dhismooyin, adeegyo maaliyadeed iyo hanti ma guurtada ah oo badan.
Mushaharka iyo faa'iidooyinka kale
Mushaaraadka sare iyo tas-hiilaadka dakhliga aan canshuurta laga qaadin waxay Dubai ka dhigayaan kan ugu sareeya xulashooyinka duulimaadka si loogu doorto Dubai mid ka mid ah meelaha ugu guusha badan ee shaqada. Si aad u run sheegtid, Dubai waa mid ka mid ah dowladaha ugu mushaharka badan dhammaan qaybaha kale ee Imaaraatka. Mushaharku wuxuu u dhexayn karaa meel AED 75,000 bil ah maamulayaasha guud ee farsamada ama maareeyayaasha saadka ee ka shaqeeya warshadaha injineernimada, saliida iyo gaaska. Agaasime sare oo ka tirsan wershadaha dhismaha ayaa ku xareyn kara agagaarka AED 80,000 bil kasta. Laakiin xaddiga bilawga lacagta ee maamulayaasha iyo injineerada waxay ku kala bixi karaan meel kasta inta udhaxeysa AED 12,000 illaa AED 15,000 bilkastaba. Waxaa jira qodobo badan oo ay Mushaharka billaha ah ee shaqo doonka ayaa laga yaabaa inay ku xirnaato. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah:
Shaqooyinka intooda badan ee bixiya magdhawga sare ee adeegyadu waxay sidoo kale raacaan lacago kale oo badan sida guryo bilaash ah, biilal loogu talagalay telefoonnada gacanta, baabuurta iyo tikidh wareeg ah sannad walba oo ka mid ah kuwa kale.
In kasta oo xirmooyinka mushaarka ay noqon karaan kuwo soo jiidasho leh dhammaan fursadaha shaqo ee aagga, badanaa waxay ku yimaadaan kharash dheeraad ah. Qiimaha nooluhu sidoo kale waa mid aad u sarreeya waxaana lagama maarmaan u ah dadka shaqo doonka ah in ay tixgeliyaan. Waxay qaadan doontaa agagaarka AED 9000 bishiiba si ay u kireeyaan guryaha hudheellada 2. Heerkuna aad ayuu u sareeyaa kuwa aan fiicneyn, sidoo kale waxay ku wareegsan tahay agagaarka AED 7000 ee guryaha 2 guriga. Waa suurtagal in la helo qolka inta badan guryaha la wadaago waxay ka socdaan magaalada oo dhan agagaarka AED 2000.
Qiimo dhimista batroolka iyo dayactirka baabuurta, waa ikhtiyaar weyn inaad iibsato gaari gaadiid ah. Ikhtiyaarka ah in lagu kireeyo gaari bille ah wuxuu u dhexeeyaa AED 1500 oo loogu talagalay gaari yar oo hatchback ah. In kasta oo taksiileyaashu ay ku dallici karaan qiyaastii AED 2 kiloomitir kiiba, shaqsiyaadku waxay ka faa iidaysan karaan basaska bartamaha magaalada qiyaas ahaan qiyaastii isla qiimaha safarka oo dhan.
Waxbarashadu waxay khusaysaa
Waa mid kale Waa muhiim in carruurta laga fiirsado. In kasta oo shaqsiyaadku ay inta badan ku qaataan shaqadooda shaqooyin aad u adag si ay u ururiyaan AED kasta, ma jiro iskuul dowladeed oo carruurta ka qaadi doona waxbarashada. Waxay aad ugu egtahay borotokoolka Dowlada Dubai. Taasi waxay ka dhigeysaa iskuulada gaarka loo leeyahay iyo kuwa caalamiga ah ikhtiyaarka kaliya ee loogu talagalay duulimaadka in loo weecdo dhanka waxbarashadda waaxdooda. Laakiin kharashaadka ku baxa waxbarashada iyo khidmadaha waa kuwo aad u sarreeya, oo qiyaastii ah AED 90,000 sanad walba, gaar ahaan iskuulada caalamiga ah ee hormuudka ka ah aaga balaaran.
Sida waddan kale oo muslimiin ah, toddobaadkii shaqo ee Dubai wuxuu soconayaa Axadda ilaa Khamiista inta badan warshadaha. Qaar ka mid ah meheradaha tafaariiqda iyo ganacsiyada kale, toddobaadka shaqadu waxay socdaan Sabti ilaa Khamiista, Jimcaha (maalinta quduuska ah ee Muslimiinta) oo ah isbuuc kasta sida waddan kale oo muslimiin ah. Saacadaha shaqada ayaa sidoo kale loo yaqaanaa in ay kala duwan yihiin warshadaha ilaa warshadaha. Saacadaha shaqada sida caadiga ah waxay kala duwanyihiin 8 AM subaxii ilaa 1 AM galabtii kadibna waxaa ku xigta nasasho saddex saacadood ah. Shaqadu waxay dib u bilaabi doontaa 4 PM waxayna sii wadi doontaa saacadaha kale ee 3 illaa 7 PM Mar kale waxaa jira isbeddel loogu talagalay ururrada ganacsiga caalamiga ah ee guud ahaan ka shaqeeya saacad 9 AM ilaa 6 PM Waxaa jira hoos u dhaca saacadaha shaqada inta lagu jiro bisha Ramadan.
Kuwa shaqo doonka ah ee xiiseynaya waxay u jeesan karaan boggag internet oo shaqo badan iyo wakaalado shaqaaleyn si ay u raadiyaan fursado furan. Waxay kaloo isticmaali karaan websaydhka shirkadda si ay wax uga ogaadaan wax ku saabsan baaxadda la heli karo iyo banaan. Ikhtiyaar kale ayaa noqon kara in lagu soo gudbiyo asxaabtaada, kuwa aad is garataan ama aad u isticmaasho wicitaan qabow si aad uga faa'iideysato tilmaamaha qaarkood.
Talooyin ku Saabsan Shaqada Shaqada ee UAE
Dadku waxay u safraan UAE sababao kala duwan awgood, ugu muhiimsan, shaqo raadinta. UAE waa meelaha ugu sareeya ee ganacsiga iyo dalxiiska. Gobolku sidoo kale si dhakhso leh ayuu ugu koray sababtuna tahay meesha uu joogo iyo farsamooyinka maamul ee waxtarka leh. Sida gobollada kale, shaqaalayntu waa sababaha ugu badan ee saboolka u guuraya miyiga. In kasta oo ay tahay horumar dhab ah iyo kobcinta kaabayaasha waxay la xiriiraan fursadaha shaqo, inaad shaqo ka hesho UAE ma aha dammaanad.
Fursadaha shaqadu way kala duwan yihiin laakiin waxay u baahan tahay wax ka badan xirfadahaaga iyo aqoontaada. Sida aad u sameyso arji, meesha aad ka dalbato, goorta aad dalbanayso, iyo sida aad u la xiriirayso loo shaqeeyaha waa arrimo kasta oo lagu go'aamiyo ugaadhsiga shaqo ee guuleysta. Dadka qaarkiis waxay qabaan fikrad aan fiicnayn oo ku saabsan UAE iyo helitaanka shaqooyin sababtoo ah ma ay garanayaan sida loo sameeyo. Qaarkood waxay helayaan shaqo leh mushahar hooseeya.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin ku saabsan shaqo ku raadinta UAE.
Imaaraadku waa bartilmaameed muhiim ah; xaqiiqda ah in maalgashadayaashu ay ku qulqulayaan sababta oo ah koboca suurtagalka ah ee gobolka; waxaa jira fursado badan oo shaqo lagu helo. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax iska cad oo ku saabsan shaqo ka helidda waddanka Carabta. Waa inaad ogaataa nooca gaarka ah ee xirfadaha iyo heerka khibradaha looga baahan yahay awoodaha kaladuwan. Sidoo kale, waa inaad ogaataa heerka caadiga ah ee khibradda ay uga baahan yihiin shirkadaha ka mid ah warshadaha.
Dabcan, waad u baahan tahay xirfadaha la xiriira si aad shaqo ugu hesho meel kasta oo adduunka ka ah. UAE, waa wax ka badan lagama maarmaan. Haddii aad rabto shaqo kugu habboon shirkad caan ah, waxaad u baahan tahay xirfado ku habboon. Muddo dheer, shaqaalaha Aasiya waxay baahi weyn u qabeen; gobolka waxaa hada ku buuxsamay musharixiinta Aasiya, waqti kadib, baahida loo qabo murashaxiinta noocan ah ayaa yaraatay. Sidoo kale, awoodda gorgortanka ee loo shaqeeyeyaasha UAE waa mid sare; kuwani waa astaamo muhiima oo ka mid ah adduunka shirkadda guud ee carabta.
Cilmi baaris ayaa muhiim ah. Xaqiiqdii, waa inaad sameysaa codsiyadaada oo aad diyaarsatid dukumintiga lagama maarmaanka ah bil walba booqashadaada. Shirkadaha intooda badan ee gobolka waxay u badan tahay inay kugula socdaan muddada baaritaanka 3 ee toddobaadka. Waa inaad diyaar u noqotaa duruufahaas. Shaqada gurigaaga si fiican u samee.
Raadi habka codsiga habboon ee ku habboon
Codsashada shaqo ee UAE laga yaabee inaysan jeclaan inaad ka joogto dalkaaga. Qaabka loo dalbado shaqo halkan waa gaar. Diritaanka hal CV ga ma dhici karto xitaa inuu kugu soo dhawaado habka wareysiga. Xaqiiqdii, waa inaad codsataa shaqooyin kala duwan oo hubso inaad kujirto warqad dabool. Waqti kasta kahor intaadan dirin CV iyo warqad dabool, waa inaad sifiican u eegtid CV kasta.
Si ka duwan CV-yada kale, waxaad u baahan tahay inaad bixiso faahfaahinta VISA-gaaga. Taariikhda bilawga iyo dhicitaanka waa waajib. Qaranka waxaa ku takhasusay khubaro ajaanib ah sidaas darteedna waxay isha ku hayaan loo shaqeeyeyaasha tafaasiisha noocan oo kale ah si loo xaqiijiyo shaqsiyaadka ku hawlan ganacsigooda. Sida iska cad, waa inaad muujisaa xirfadaha u dhigma shaqada aad dalbaneysid. Ka sokow, waxaa lagaa filayaa inaad ku darto tixraacyo CV-gaaga ama warqadda daboolida, waxay sare u qaadeysaa kalsoonida loo-shaqeeyaha sidaa darteed fursadaha badan ee aad ku sugayso inaad shaqada sugto. Fursadaha wanaagsan, ka dalbo dhammaan shaqooyinka laga heli karo aqoontaada.
Saamaynta warbaahinta bulshada lama illoobi karo. UAE oo ah dhaqaala dhakhso u koraya ayaa maray kacaan iyadoo ay ugu wacan tahay teknolojiyadda. Internetku saamayn kuma yeelan oo keliya warshadaha ganacsiga laakiin sidoo kale adduunka shirkadaha. Loo-shaqeeyayaashu waxay si tartiib tartiib ah u qabsanayaan aaladaha khadka tooska ah ee wareysiga. Xaqiiqdi, shirkadaha badankood waxay kaaga baahan doonaan inaad buuxiso foomamka khadka tooska ah, ku lifaaq CV-gaaga, oo aad sugto wada xiriirka.
Haddii aad ka fikireyso inaad shaqo ka codsato UAE, waa inaad ku bilowdaa dib-u-eegista boggagaaga warbaahinta bulshada. Waa inay noqotaa xirfadle; iska ilaali sawirka iyo dhejiska wax u dhimi kara daacadnimadaada. Loo-shaqeeye wuxuu si fudud u lumin karaa kalsoonida adiga ama ku abuuri karaa aragti qaldan sababta oo ah nooca dhajinta ee ku yaal aaladahaaga warbaahinta bulshada.
Sidookale, loo shaqeeyayaashu waxay shaqaaleeyaan magacyada warbaahinta bulshada sida LinkedIn. Waa inaad u habaynaysaa astaantaada guud si ay u dhigto shuruudaha loo shaqeeyaha iyo waxyaabaha laga filayo. Muuqaalkaaga, habeysan kabaha ereyada furaha gaarka ah leh ee la xiriira khibradahaaga. Loo shaqeeyayaashu waqti ayey ku qaataan warbaahinta bulshada inta ay socoto qoritaanka si loo qiimeeyo xirfadda iyo awoodda shaqaaleysiin shaqsiyeed. Wax kasta oo aan loo baahnayn oo madadaalo ah oo wax u dhimi kara sawirkaaga waa in laga saaraa.
Foomamka buuxa ee shabakadaha
Shirkadaha badankood ee UAE waxay kaa doonayaan inaad buuxiso faahfaahinta boggaga internetka. Faahfaahinta badankood waxay umuuqdaan kuwo aan loo baahneyn oo caajis ah, ha u oggolaan kuwan inay kaa weeciyaan. Shirkadaha waxaa laga yaabaa inaysan xiiseyneynin inay cusboonaysiiyaan foomamka si ay ugu haboonaato baahiyaha shaqaaleynta kaladuwan oo ay la micno yihiin inay kaa rajeynayaan inaad siiso faahfaahinta oo dhan. Way xanaaqsan tahay inaad ku celiso faahfaahinta qaar laakiin waxaad u baahan tahay inaad sameyso haddii ay tahay inaad shaqo ka hesho UAE.
Hubso inaad raacdo talooyinkan 4 si aad u sugto shaqo wanaagsan oo ka jirta UAE.
Dowladdii labaad ee Imaaraadka Carabta (UAE) marka la eego cabir ahaan, Dubai, waa xudunta dhaqaalaha adduunka. Dad badan ayaa ku hamiyaya inay shaqooyin ka raadsadaan aaga inta badan faa iidooyinka ay ka heli karaan halkan oo ay ku jiraan mushaharka wanaagsan, dhaqanka shaqada weyn, qaab nololeedka raaxada, daqliga canshuur la’aanta iyo muuqaalkiisa xiisaha leh. Waxay ka mid tahay dawladaha xorta ah ee caan ku ah heerarkeeda horumarineed ee sarreeya. Xitaa waa suurtagal in duulimaadyadu ku yeeshaan hanti ay ku leeyihiin gobolka boqortooyada Dubai, si ka duwan ummadaha kale ee ku yaal Bariga Dhexe. Taasi waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu sarreeya ee shaqo doonka ah ee ka kala yimid adduunka oo dhan oo shaqo ka raadsanaya gobolkan.
Inta badan waddamada bariga bariga dhexe waxay ku tiirsan yihiin kaliya saliida inay tahay udub dhexaadka dhaqaalahooda. Laakiin waxyaabaha Dubai u yaal way kala duwan yihiin. Waxbadan oo warshado kale ah ayaa hada ka socda gudaha Dubai, soo jiidashada shaqo doonka ka yimid Poland, India, Pakistan, Bangladesh iyo qaybo kale oo badan oo Aasiya ka mid ah si ay uga shaqeeyaan qaybaha sii kordhaya. Warshadaha ugu waaweyn ee aan ka aheyn saliida iyo gaaska ee hada ku kobcaya Dubai waxaa kamid ah dalxiis, dhismooyin, adeegyo maaliyadeed iyo hanti ma guurtada ah oo badan.
Mushaaraadka sare iyo tas-hiilaadka dakhliga canshuur-dhaafka ah waxay ka dhigeysaa Dubai mid ka mid ah xulashooyinka ugu sareeya ee kharash-gareeyeyaasha si loogu xusho Dubai inay ka mid tahay meelaha ugu wanaagsan ee lagu shaqeeyo. Inaad run sheegto Dubai waa mid kamid ah dowladaha ugu mushaharka badan dhamaan qeybaha kale ee Imaaraatka. Mushaharku wuxuu u dhexayn karaa meel AED 75,000 bil ah maamulayaasha guud ee farsamada ama maareeyayaasha saadka ee ka shaqeeya warshadaha injineernimada, saliida iyo gaaska. Agaasime sare oo ka tirsan wershadaha dhismaha ayaa ku xareyn kara agagaarka AED 80,000 bil kasta. Laakiin xaddiga bilawga lacagta ee maamulayaasha iyo injineerada waxay ku kala bixi karaan meel kasta inta udhaxeysa AED 12,000 illaa AED 15,000 bilkastaba. Waxaa jira arrimo badan oo mushaharka shaqo-dooneyaasha bishii ay ku xirnaan karaan. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah:
In kasta oo xirmooyinka mushaarku ay u soo jiidan karaan dhammaan fursadaha shaqo ee deegaanka, waxay had iyo goor la timaaddaa kharashyo dheeri ah. Qiimaha nolosha ayaa sidoo kale sarreeya waana lagama maarmaan in shaqo dooneyaashu tixgeliyaan arrintaas. Waxay ku qaadaneysaa qiyaastii AED 9000 bishiiba markii la kireysto guryaha jiifka ah ee 2 ee qolka jiifka ah. Qiimeyaashu xitaa way u sarreeyaan kuwa aan la qorin sidoo kale, waxay u kala baxaan AED 7000 oo loogu talagalay guri qolka jiifka ee 2. Waa suurtogal in la helo qol inta badan guryaha la wadaago ee ku baahsan magaalada oo dhan qiyaasti AED 2000.
Iyada oo qiimaha hoos u dhaca bangiyada iyo dayactirka baabuurta, waa doorasho weyn oo lagu iibsan karo baabuur loogu talagalay gaadiidka. Doorashada baabuurka bil kasta wuxuu u dhexeeyaa agagaarka AED 1500 ee baabuur yar oo hatchback ah. In kasta oo tagaasida ay ka qaadi karto AED 2 halkii kilomitirba, shakhsiyaadka ayaa ka faa'iideysan kara basaska magaalada si qiyaastii isku midka ah ee safarka oo dhan.
Waa wax kale oo muhiim ah in la tixgeliyo carruurta. In kasta oo shaqsiyaadku ay inta badan ku qaataan shaqadooda shaqooyin aad u adag si ay u ururiyaan AED kasta, ma jiro iskuul dowladeed oo carruurta ka qaadi doona waxbarashada. Waxay aad ugu egtahay borotokoolka Dowlada Dubai. Taasi waxay ka dhigeysaa Dugsiyooyinka gaarka loo leeyahay iyo kuwa caalamiga ah ayaa ah ikhtiyaarka kaliya ee loogu talagalay duulista inay u jeestaan ​​dhanka waxbarashadooda. Laakiin kharashaadka ku baxa waxbarashada iyo khidmadaha waa kuwo aad u sarreeya, oo qiyaastii ah AED 90,000 sanad walba, gaar ahaan iskuulada caalamiga ah ee hormuudka ka ah aaga balaaran.
Sida ummadaha kale ee muslimka ah, usbuuc shaqo oo ku yaal Dubai waxay socotaa laga bilaabo Axadda ilaa Khamiista inta badan warshadaha. Qaar ka mid ah dukaamada tafaariiqda iyo ganacsiyada kale ee gaarka ah, usbuuca shaqada wuxuu shaqeynayaa Sabtida ilaa Khamiista, Jimcaha (maalinta barakeysan ee muslimiinta) oo noqoneysa usbuuca usbuuca sidii waddan kale oo Muslim ah. Saacadaha shaqada ayaa sidoo kale lagu yaqaanaa inay ku kala duwan yihiin warshadaha ilaa warshadaha. Saacadaha ganacsiga badanaa waxay udhaxeeyaan 8 AM subaxa ilaa 1 AM galabtii waxaana ku xigay nasasho seddex-saac ah. Shaqadu waxay markaa dib u bilaaban doontaa 4 PM waxayna sii socon doontaa saacado kale oo ah 3 ilaa 7 PM Waxaa mar kale jira kala duwanaansho loogu talagalay ururada ganacsiga caalamiga ah ee guud ahaan shaqeeya saacadda 9 AM illaa 6 PM Waxaa jira dhimis saacadaha shaqada inta lagu jiro bisha Ramadaan.
Walaacsan shaqo doonku wuxuu u jeedsan karaa bogag internet oo shaqo badan iyo wakaalado shaqaaleyn si ay u raadiyaan fursado furan. Waxay kaloo isticmaali karaan websaydhka shirkadda si ay wax uga ogaadaan wax ku saabsan baaxadda la heli karo iyo banaan. Ikhtiyaar kale ayaa noqon kara in lagu soo gudbiyo asxaabtaada, kuwa aad is garataan ama aad u isticmaasho wicitaan qabow si aad uga faa'iideysato tilmaamaha qaarkood.
Shaqooyinka In Dubai - Waxa Lagu Xushay iyo Sida Loo Doorto?
Waxaa a U riyoona inay dad badani ku noolaadaan kuna shaqeeyaan gobolka ugu weyn ee Dubai. Laakiin way adkaan kartaa in la helo shaqo wanaagsan halkaas gudaheeda haddii qofka damacsan yahay uusan aqoon fiican u laheyn sida ay wax uga shaqeeyaan UAE. Waxaan la nimid matalaad aasaasi ah oo ku saabsan xaaladaha ugu habboon fama shaqooyinka iyo shaqaalaynta gobolka.
Dubai waa mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee safaaradda 7 ee Imaaraatka Carabta (UAE). Amiir, oo ah taliye madaxbanaan ayaa gacanta ku haya gobolka guud ahaan, oo ku yaal marinka koonfureed ee khaliijka khaliijka. Markay noqoto gobollada hodanka ah ee UAE, Dubai waxay ka mid tahay hoggaamiyeyaasha liiska.
Warshadaha saliida ayaa wali ah lafdhabarta dhaqaalaha gobolka. Hantida ugu weyn ee Dubai ayaa kaliya sabab u ah ilaha ballaaran ee saliida dabiiciga ah. Kaydka weyn ayaa leh u beddelay Dubai mid ka mid ah kuwa ugu horreeya soosaarka saliidda suuqa adduunka. In kasta oo ay laf dhabar u tahay dhaqaalaha amiirka, Dubai weligeed kuma tiirsanaan kobcinteeda. Waxa jira qaybo badan oo kale oo duullaan ah oo ka dhigaya meeshan mid ka mid ah gobollada ugu dhaqsaha badan adduunka. Waaxyaha kale ee ay Dubai hada kujirto waxaa kamid ah:
Tiknoolajiyada Macluumaadka (IT) oo ka mid ah kuwa kale.
Iyada oo kor u kacaysa waaxyadan badan ee horumaray, Dubia waxay soo gelisay baaxadooyin fursado shaqo oo aan la tirin karin. Intaa waxaa dheer, heerarka mushaharka sarreeya, shaqooyinkan lacagta badan waxay ku casuumaan shaqo-dooneyaal tiro badan oo adduunka ka kala yimid sanad walba. Aqoonta saxda ah iyo heerka khibradaha, musharixiinta si fudud ayey ugaga faa'iideysan karaan shaqooyinkaan. Shaqooyinka sidoo kale waxay ubaahanyihiin xirfado kuhadlida Ingriisiga xaaladaha badankood.
Shahaadooyinka looga baahan yahay shaqooyinka
Aqoonta qayb kasta ayaa si cad u muuqda. Heerarka ugu caamsan waxaa ka mid ah:
Education - Machadyada waxbarashada waxaa la dejiyaa maalin kasta oo bixiya tirooyinka shaqooyinka barashada. Musharrixiinta waa in ay haystaan ​​shahaadada bachelorka maad kasta oo leh sharikadaha ugu yaraan si loogu dabaqo shaqooyinka. Shahaadada B AE waa shuruud muhiim ah. Musharrixiinta waayo-aragnimo u leh barashada tacliinta ee waxbarashada (meel kasta) waxay u badan tahay inay ku xiraan bacda shaqada.
IT - Dubai waxay caan ku tahay qaab-dhismeedka heer caalami iyo maamul ahaanba. Waxay ku boorisay shirkado badan oo IT-da ka shaqeeya in ay saldhigyo ka furaan gobolka. Musharixiinta leh shahaadada koowaad ee jaamacadda ama shahaadada mastarka ee barnaamijyada kombiyuutarka ayaa u qalma in laga codsado shaqooyinka IT-ga inta badan shirkadaha IT-da ee la qiimeeyo gobolka oo ay ku jiraan IBM, Oracle iyo Microsoft. Shahaadada diblooma ee xirfad kasta oo laxiriirta machadka la qiimeeyo ayaa sii kordhinaya fursadaha xulashada. Murashaxiinta leh waayo-aragnimada 4 + sano ayaa aad looga doorbiday.
Tafaariiqda - Dubia sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa inay tahay caasimada laga dukaameysto dhammaan gobollada Bariga Dhexe, gaar ahaan kororka tirada suuqyada dukaameysiga ee aagga. Waqtigaan la joogo, waxaa jira in ka badan suuqyada '70' iyo bakhaaro waaxeedyo badan oo aan la tirin karin, dukaamo iyo dukaamo ay ka shaqeeyaan gobolka. Shahaadada MBA ee machadka la qiimeeyo ayaa ah mid aasaaska ah shuruudaha loogu talagalay boorso shaqo wanaagsan ee warshadaha tafaariiqda. Shahaadada diblooma ee koorsooyinka maareynta tafaariiqda ayaa sii kordhinaya suurtagalnimada xulashada.
Martigelinta - Musharixiinta haysata shahaadada koowaad ee maareynta hoteelada ayaa u qalma si aad u codsato shaqooyinka kala duwan ee waaxdaan.
Meelaha shaqada ee Dubai
Sida ugu fiican shaqo ka raadsato Dubai waxaa lagu maraa bogagga internetka ee shaqada. Goobahan loogu talagalay shaqada ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay raadiyaan shaqooyin ku saleysan waddammada. Isticmaalayaashu way u baari karaan iyaga si ay u raadsadaan Dubai dalabyada ay u arkaan soo jiidasho. Google waa, dabcan, ikhtiyaar kale oo ballan qaad ah si loo badbaadiyo dadaal iyo waqti. Isticmaalayaasha waxaa looga baahan yahay inay abuuraan koonto websaydhyada ka soo muuqday liiska raadinta si ay isu diiwaan geliyaan iyo u gudbi arjiga dalabaadka shaqo ee badan. In kasta oo shabakadaha shaqada badankood ay bixiyaan adeegyo lacag la’aan ah, ku biirista xubin saami leh oo leh rukhsad la bixiyo waxay sii kordhineysaa fursadaha helitaanka fursadaha ugu wanaagsan.
Shirkadaha Talo-bixinta Shirkadaha ee Dubai
Waa hab kale oo shaqo doonka badiyaa u jeesan karaan ee loogu talagalay xalalka shaqo ee waxtarka leh ee ka jira Dubai. Waxaa jira tirro badan oo ah hayadaha shaqaalaynta Dejinta safaaradaha kuwaas oo caawimaad siiya shaqo doonka. Mar alla markay musharraxiintu siiyaan shirkadaha faahfaahintooda - dib u bilaabaan iyo shahaadooyin (waxbarasho iyo xirfad leh), waxay eegi doonaan shaqada ugu habboon ee habboon marka loo eego kartida murashaxa. Waxay bixiyaan badan adeegyo kale sida talooyin ku saabsan qoritaanka resumeyga, hagida ku saabsan rajada mustaqbal ee gobolka, filashada qaabdhismeedka mushaharka iyo dejinta astaan ​​u qalma adeegyada kale oo badan. Shirkadaha badankood guud ahaan waxay ku eedeeyaan murashaxiinta lacag yar oo ku caawinta howlahooda sanadlaha ah.
Waddooyinka ugu sarreeya si aad uga heshid Shaqo Sugan Dubai
Dubia waa mid ka mid ah kuwa aad u Meelo yar ayaa ka haray dhulka halkaas oo ay ka socoto bandhig shaqaalayn oo shaqeynaya. Ugu yaraan taasi waa sida ay dareemayaan deganeyaasha qaybo kale oo badan oo adduunka ah oo ay ku jiraan Hindiya, Boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka qaasatan ka dib markii caadooyinka shaqooyinka joogtada ah laga jaro inta badan shirkadaha hormuudka ah xilliyada ay ku jiraan khataraha dhaqaale.
Sidaas darteed, waxaa jira xamaasad firfircoon oo ka shaqeysa dibedda, gaar ahaan Dubai, oo ah gobolka ugu wanaagsan Bariga Dhexe ee Imaaraatka Carabta. Tan inta badan waa sababta oo ah boosku wuxuu bixiyaa canshuur-dhaaf habka nolosha ee maamulayaasha adduunka. Loo shaqeeyeyaasha ka socda Dubai ayaa wali leh cabbir foorno loogu talagalay dadka aqoonta u leh oo adduunka oo dhan ka kala yimid meherado badan.
Laakiin su’aasha ugu weyn ee wali jirta ayaa ah sida loo helo shaqo iyo fiiso aad ku tagto oo halkaas uga shaqeyso sida shaqaale Aljeeriyaan ah. Si arrintan loo xalliyo, waxaan la nimid hababkii ugu caansanaa ee shaqo doonka caalamiga ahi ay iskuday ugu heli lahaayeen shaqo helid wanaagsan inay ka mid tahay meelaha adduunka laga doonayo.
Inta badan ururada fadhigiisu yahay Dubai ayaa shaqaalaysiin culus sameeya sanad walba, gaar ahaan gobolada sida Hindiya iyo Boqortooyada Ingiriiska. Soo bandhigista shaqada ayaa lagu qabtaa meelahan oo kale sanad walba. Tani waxay la imaaneysaa hal fursad oo lagu booqdo oo lala kulmo kuwa ku qoran qorista ee wax soo saar kasta oo la xiriira si loo baaro noocyada fursadaha shaqo ee la soo bandhigo. Taas waxaa ka mid ah ogaanshaha xirmooyinka mushaharka iyo dhammaan waxyaabaha kale ee la heli karo. Shaqo-dooneyaasha sidoo kale waxay u jeesan karaan bixiyeyaasha adeegga khubarada si dib u dejin caalami ah oo ay soo aruuriyaan xoogaa aqoon ah oo ku saabsan helitaanka a fiiso Ka caawi iyaga inay tagaan oo ay ka shaqeeyaan gobolka ugu fiican. Waxyaabahani waxay soo bandhigayaan shaqsiyaad badan qaab ay ku raadiyaan nolol cusub oo ay noloshooda uga dhisaan Bariga Dhexe. Waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee qofku u ku heli karo faahfaahintiisa shaqabixiyaha waaxaha shaqada ee ay quseyso.
Waa hab kale oo sahlan oo lagu raadsan karo baaxadda jirta iyo fursadaha furan ee ka jira Dubai. Meelo badan oo Dubai ka dhisan ayaa jira Hay'adaha shaqaalaynta ee bixiya fursado shaqo oo ku habboon musharraxiinta yeelashada astaan ​​ku habboon. Waxaa lagula xiriiri karaa shabakada oo ay weydiisan karaan adeegyadooda. Hay'ado qaarkood ayaa sidoo kale laga sameeyay dalal ay ka mid yihiin India iyo Pakistan kuwaas oo ka shaqeeya in ay kaalmo shaqo ku siiyaan dadka deggan meesha ay ku yaalliin fursadaha ku saleysan Dubai. Hay'adahan ayaa laga yaabaa inay ku dallacaan ujro sanadle ah oo ku meelgaadh ah oo loogu talagalay adeegyada badan ee ay u fidiyaan shaqo doonka oo ay ka mid yihiin talooyin ku saabsan qoritaanka resume-ka iyo u-tartamidda murashaxiinta sida saxda ah. Waxaa jira bogag shaqo oo badan oo khadka tooska ah laga helo sidoo kale kuwa shaqo raadiska ah ayaa raadin kara. Waa hubaal Xeellooyinka ayaa si gaar ah loogu heeliyaa shaqooyinka ku saleysan Bariga Dhexe oo la imaado ikhtiyaar u saamaxaya dadka isticmaala inay raadiyaan dhammaan shaqooyinka la heli karo ee ku saleysan waddamada tagaya.
Bartilmaameed dheer oo loo-shaqeeyayaasha
Waxaa kale oo suuragal ah shaqo-dooneyaasha ka yimid adduunka oo idil inay xiriir fog la yeeshaan shaqo-bixiyeyaasha iyaga oo u mara websaydhka shirkadda iyo faahfaahinta kale ee lagala xiriiro. Waxay noqon kartaa geedi socod qaadasho waqti badan iyadoo aan la xaqiijin laakiin waxay ka badbaadineysaa shaqo doonka xanuunka xanuunka booqashooyinka soo noqnoqda ee ay ku tagayaan wakaaladaha shaqada iyo lacagaha ay soo magacaabeen. Sidookale, waxaa jira hay'ado been abuur ah oo laga yaabo ineysan bixin wax adeeg dhab ah inkasta oo ay qaadayaan khidmadaha adeega. Bartilmaameedsiga loo shaqeeyaha ayaa ka hor istaagaya musharixiinta inay ku dhacaan hayadahaas iyo waxay xaqiijisaa fursadaha shaqo ee dhabta ah ee ay hay'addu si toos ah u siiso. Musharaxiintu waxay ka raadin karaan websaydhada warshadaha ay khusayso gaar ahaan qaybta waxayna raadinayaan waxkastoo / dhamaan fursadaha furan ee hada la heli karo ee xawaareyaasha si ay uga shaqeeyaan Dubai. Musharixiinta ayaa si fudud uga dalban kara websaydhka resume ay ku qoran yihiin iyo warqad warqad ka kooban oo ku qornaa dhammaan aqoonta, xirfadaha iyo khibradda iyo waxa iyaga ka dhigaya musharrax ku habboon shaqada. Haddii qorayaashu ay xiiseynayaan, waxay si toos ah ula xiriiri doonaan musharixiinta, iyaga oo adeegsanaya mas'uuliyadaha dhexe.
Jir ahaan jir ahaan
In kasta oo ay u muuqan karto wax aan macquul ahayn, haddana waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee shaqo looga ugaadhsado Dubai. Waxay qaadan kartaa dadaal badan iyo qarash laakiin ku jir ahaanshaha shaqo raadinta waxay noqon kartaa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu raadsan karo fursadda saxda ah ee UAE. Murashaxiinta waxay wataan nuqul ka mid ah resumeydooda oo ay la socdaan dhammaan faahfaahinta shahaadooyinka, xirfadaha iyo dukumiintiyo kale oo ay shaqsiyan ku tagayaan ururka oo jir ahaan u dalban karaan fursad kasta oo furan oo laga heli karo waaxda ay quseyso. Jadwalka shaqada wuu ku kala duwanaan karaa urur ilaa urur iyadoo lagu saleynayo nooca ganacsiga. In kasta oo qaar ka mid ah ganacsatada maxalliga ah ay ku shaqeeyaan saacad ah '8 AM illaa 7 PM iyada oo 3-saac nasasho u dhexeysa, ganacsiyada gudaha ayaa ka shaqeeya saacadaha' 9 AM 'illaa saacadaha 6 PM. Iyadoo Jimcaha uu yahay usbuuca rasmiga ah ee dadka oo dhan, waaxaha qaarkood waxay ku shaqeeyaan wareeg toddobaadle ah Axadda ilaa Khamiista sidoo kale.
Kuwani waa siyaabaha ugu sareeya ee loo heli karo shaqo ee Dubai. Siyaabo kale ayaa waxaa ka mid ah shabakad shakhsi ahaaneed ama iyada oo loo marayo xayeysiinta qorista ee ay shirkaduhu bixiyaan.
Maxaa Ka Dhigaya Dubai Dubai Doorashada ugu Wanaagsan ee Shaqaalaha Caalamiga ah?
Dubai, oo ka mid ah shirkadaha soo saara saliida adduunka sidoo kale waa mid kamid ah hogaamiyaasha shaqada waqtigan xaadirka ah ee howlaha garoonka diyaaradaha. Arrimo badan ayaa isku daraya si looga dhigo gobolka Imaaraatka Carabta in ay noqdaan midka ugu sarreeya xulashooyinka shaqo doonka adduunka oo dhan. Hoos waxaa ku xusan waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee u weeciyay Dubai inay u noqoto meesha ay higsaneyso himilada musharraxiinta badan.
Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee inta badan shaqsiyaadka badanaa iska iloobaan ama iloobaan. Tan inta badan waa sababta oo ah waxaan shardi u nahay inaan si otomaatig ah u bixinno qayb muhiim ah oo ka mid ah lacagteenna sida adag loo kasbado ee dowladda oo aan waligeen ka fikirno sida culeyskani culeys u yahay, gaar ahaan meelaha qaarkood oo heerarka canshuurta ay u sarreyn karaan sida 40% wadarta dakhliga. Taasi waxay ka dhigan tahay doolar kasta oo aan kasbanno, waxaa nalooga baahan yahay inaan lacag ku bixinno 40 senti hey'adaha xukuma waxaanan ku qanacsanahay kaliya qaawannada '60' inkasta oo ay naga go'an tahay iyo shaqo adag. Markii lagu tixgeliyo cabirka macro, waxay u taagan tahay caqli gal inaan si bilaash ah ugu shaqeyno qayb ka mid ah sanadka oo mudadu waxay u dhaxeysaa bil ilaa afar iyadoo kuxiran meesha aad ka timid. Dubai, dhinaca kale, waxaa caan ku ah inay ka dhaafto kharashaadka canshuurta dakhliga, sidaas darteed u oggolaanaya iyaga inay ku raaxaystaan ​​dhammaan shaqooyinkooda adag iyo u hibeynta sida ugu wanaagsan.
Guud ahaan xirmo fiican
Sababta ugu weyn ee musharixiinta dhamaan daafaha adduunka ay aad ugu jecel yihiin inay ku biiraan shaqooyinka ku saleysan Dubai waa isku xirnaanta guud ee mushaarka ee loo shaqeeyayaasha ay bixiyaan. Qiyaasta guud, xirmooyinka waxay u egtahay inay ka sarreeyaan '20%' ka badan inta badan waddamada kale. Tani waa siyaasad ay Dubai ku soo dartay inay ku soo jiidato hibooyinka ugu wanaagsan dhamaan daafaha dunida. Markaa marka lagu daro dakhliga aan cashuurta laga qaadin waxay u taagnaan kartaa qadar dakhli aad u badan. Tusaale ahaan, qof kasbanaya $ 100,000 sanadkii isla markaana bixinaya cashuurta 40% wuxuu guriga qaadanayaa $ 60,000 sanadkiiba. Isla murashaxiintaas Dubai waxay bixisaa $ 120,000 iyadoo leh canshuur eber ah, musharraxu wuu wadayaa. Taasi asal ahaan waa laba jibaar lacagta uu ku farxi lahaa haddii uu cashuurta bixiyo. In kasta oo farsamo ahaan ay ahayd kaliya lacag dheeri ah oo ah '20%' oo aad u shaqeyneysay, dhamaadka maalinta, waxaad ku raaxeysataa mushahar labanlaab ah oo ku saleysan waxqabadka.
Miisaanka iyo lacagaha dib u bixinta
Iyada oo leh khibrad iyo jago, la imaado fikrado iyo lacag celin. In kasta oo injineer heer gelitaan ah ama maareeye uu kasban lahaa mushahar bil kasta ah oo qiyaastii ah AED 10,000 illaa AED 15,000 iyada oo kuxiran aqoontiisa, agaasime farsamo ayaa boorsada ku qaadan kara ilaa iyo inta loo yaqaan AED 80,000 wareegga billaha. Marka taa laga yimaado, waxaa jira faa iidooyin kale oo fara badan oo shaqaaleeyuhu guud ahaan u siiyo musharraxiinta isaga oo ka bilaabaya hoy bilaash ah, caymiska biilasha taleefanka, xarumaha daryeelka, hal tigidh guri oo sanadle ah iyo waxyaabo kaloo badan. Murashaxa hore u kasbaday $ 120,000, jihooyinka hoyga bilaashka ah, gaadiidka iyo dhammaan waxyaabaha kale ee aasaasiga ah waxay ku kala badnaan doonaan $ 10,000 ama ka badan. In kasta oo ay u baahan tahay gorgortan adag oo musharixiinta heerka-gelitaanka ah, oo da ’ah iyo waayo-aragnimo u leh arrimahan ayaa u sharraxnaa musharraxiinta waddooyinka Dubay. Taas macnaheedu waa in ay run ahaantii aan kharash ku bixinayn inay wax daryeelaan wax kasta oo ay soo galaana waa iyaga, iyaga oo leh faa'iidooyin dheeraad ah oo dheeri ah.
Fasax iyo tayada nolosha
Inta badan ururada waxay guud ahaan bixiyaan xero xNUMX maalin ah oo leh xNUMX saacadood oo ah maalinta shaqada. Kuwani waa madadaalo yar. Qeybta ugu wanaagsan ayaa ah musharixiintu xitaa waxay ku raaxeysan karaan fasax-bil fasax dheer ah si ay u booqdaan guryahooda oo ay waqti fiican ula qaataan qoyskooda iyo saaxiibadood. Iyada oo la gorgortamayo tikidhada tigidhada hawada oo inta badan musharraxiinta ay u badan tahay inay helaan, ka shaqeynta Dubai waa riyo ay dad badani aad u jecel yihiin. Si loogu daro, ku qanacsanaanta shaqada ee musharixiinta ay ka helaan shaqooyinka ku saleysan Dubai ma aha wax la tartamaya. Shaqeynta dhismayaasha tayada sare leh, naqshadaha ama warshadaha ugu wanaagsan ee heer caalami ah ayaa si weyn kor ugu qaadaya kalsoonida musharixiinta dhexdooda. Waxaa sii xoojiyay qiimeynta jaban ee gawaarida iyo qiimaha batroolka ee shakhsiyaadka soo daahay ay ku raaxeystaan ​​noloshooda ugu badan inkastoo jadwalka shaqada ee caadiga ah.
Kuwani waa kuwa ugu weyn arrimaha u rogaya Dubai inay noqdaan mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee musharixiinta caalamiga ah si kor loogu qaado farxadooda. Waxaa jira siyaabo fara badan oo shaqa doone uu uga dalbi karo baaxad furan qaybaha waaxyada ay khuseyso. Albaabada khadka tooska ah ee internetka, wakaalada shaqaalaynta iyo soo bandhigida shaqadu waa habka ugu fudud ee shaqo doonku u raadsado astaan ​​ku habboon oo uu dalban karo. Waxay sidoo kale kala xiriiri karaan loo shaqeeyaha si toos ah websaydhkooda ama faahfaahinta kale ee lagala xiriirayo oo ay ku xareyn karaan dalabka qasabka ah. Xayeysiinta shaqaalaysiinta waxay noqon kartaa ikhtiyaar kale oo waxbadan looga ogaado fursadaha jira.
Kuwa ugu Muhiimsan ee Shaqaalaha Dubai
Laga bilaabo Dubai Xarunta Ganacsiga Dunida illaa Burj Khalifa iyo wax kasta oo u dhexeeya waa mid gaar ah oo ku saabsan gobolka Dubai. Waa marka hore marka loo eego baaxadda iyo tan labaad marka loo eego tirada dadka ku dhex nool dhammaan walaalaha Imaaraadka ee ku sugan UAE. Sheekh Maktoum bin Buti al Maktoum, oo dib loo aasaasay 1833 ma aha oo kaliya mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee deegaanka laakiin sidoo kale xarun caan ku ah ganacsiga. Meesha ugu habboon ee gobolka ayaa ka dhigaysa xulasho habboon ganacsiga adduunka gaar ahaan waaxaha saliidda iyo gaaska, maaliyadda, dalxiiska iyo waxyaabo kaloo badan. Waxay ku taal gobollada koonfur-bari ee Gacanka Faaris, hadda waa mid ka mid ah meelaha ugu shaqada wanaagsan ee shaqo doonka laga raadsado ee shaqo doonka caalamiga ah, gaar ahaan faa iidooyinka ay ka hesho waaxyo kala duwan.
Qaybaha shaqo ee ugu caansan gobolka waxaa ka mid ah:
Waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn Dubia in kasta oo aysan ahayn qaab-dhismeedka kaliya ee dhaqaalaha qaranka. Helitaankii ugu horreeyay ee saliidda ee gobolka wuxuu soo yaraaday wax ka yar sanadihii 50 oo aad buu u hooseeyay. Baaritaannadii dambe ayaa dowlad goboleedkii loo rogay mid ka mid ah shirkadaha wax soo saara saliida isla mar ahaantaana u beddelay meesha meel ay ka helaan shaqo doonka caalamiga ah ee ka kala yimid daafaha adduunkae. Iyada oo soosaarka weyn ee noocaas ah laga soo saaray warshadaha saliidda, baaxad weyn ayaa loo furay musharxiinta u qalma inay ku soo biiraan qaybta oo u keenaan kobac kor u kacay mustaqbalkooda. Qeybta xitaa waxay bixisaa magdhow aad u ballaaran kuwa loogu qalmo iyada oo leh mushaarka ugu hooseeya ee loogu talagalay injineerada heerka-gelitaanka iyo maareeyayaasha u dhexeeya 12,000 illaa 15,000 AED. Qaddarka ugu sarreeya wuxuu u dhexayn karaa 80,000 AED ama ka sareeya agaasimayaasha farsamada ee warshadaha. Xidhmada mushaarku si balaadhan ayey u kala duwanaan kartaa iyada oo ku saleysan shahaadooyinka, khibradda iyo dhalashada murashaxa.
Waa warshado kale oo weyn oo ku yaal magaalada Imaaraatka ee UAE waxayna umadda siisaa qulqulka lacagaha shisheeye ee ballaaran. Warshadahaani si weyn ayey u koreen oo ummaddu way ku tiirsan tahay xoojinta dhaqaalaheeda xilligan xaadirka ah. In kasta oo qulqulka ugu sarreeya uu ka yimaado suuqyada wax laga iibsado, qaabdhismeedka casriga ah iyo kuwa xasiloonida ayaa sidoo kale soo jiita dalxiisayaal badan oo ajnabi ah. Sidoo kale loo yaqaanay inay tahay caasimada dukaamaysiga ee dhammaan kooxaha Bariga Dhexe ee waddammada, Dubai waxaa la siiyaa suuqyo badan, dukaanno, barxado iyo ganacsiyo kale. Dhismaha qaabdhismeedka cusub, dalxiisayaal tira badan ayaa u imanaya inay ku nastaan ​​fasax ama safarro yaryar oo ay ku qaataan lacag aad u fara badan oo horseedaysa kororka dhaqaalaha dalka. Waxa layaabka ku sii daraya waa in gaaska iyo warshadaha saliida ay ku kordhiyaan kaliya 6% ee GDP amiirka. Dalxiiska ayaa gacan ka geysta inta badan qaybta bidix. Sababtaas awgeed, xarunta wicitaanku waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu sarreeya ee shaqo doonka ah inay yimaadaan oo ay ku biiraan wax soo saarka warshadaha kobcinta dhaqaalaha qaranka. Waaxdu waxay u furan tahay labadaba mustaqbalka iyo sidoo kale musharixiinta khibradda leh inay ku soo biiraan kuna raaxaystaan ​​kor u qaadida shaqada.
Sidii horeyba loo sheegay, dhismaha qaab-dhismeedka casriga ah wuxuu umadda uyahay mid buuxda. Magaalooyinka waaweyn ilaa dhismaha, min xarumaha waxbarashada ilaa xarumaha ganacsiga, magaaladu gebi ahaanba waa cusub oo wax badan ayaa loo balamay inay soo kacdo. Tani waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah warshadaha ugu wanaagsan ee musharraxiinta musharraxnimada ah, gaar ahaan waaxda dhismaha iyo injineeriyadda rayidka ah si ay u soo baxaan oo ay u soo bandhigaan xirfadahooda dowlad-wanaagga Imaaraadka Carabta. Musharaxiinta leh shahaadada loo baahan yahay iyo waaya aragnimada si fudud u dalban karaa dhammaan jagooyinka bannaan ee bannaan.
Kordhinta dalxiiska ayaa keentay kororka suuqyada dukaamaysiga ama kor u kaca suuqyada dukaamaysigu waxay jidka u dhigeen horumarinta warshadaha dalxiiska ma cadda. Waxa kaliya ee cad waa in ay jirto xaalad kacsanaan ah oo ka dhacday waaxda wax iibsiga, taas oo ay ugu mahadcelinayaan dalxiisayaasha iyo dadka wax iibsada ee maandooriyaha ku nool Dubai. In ka badan suuqyada 70 dukaamaysiga ayaa laga sameeyay Dubai waqtiyadii ugu dambeeyay taasna si toos ah ayey u wacaysaa kharashyada caalamiga ah ee la xiriira si shaqada loo codsado. In kasta oo shardiga ugu yar ee musharraxu u dalban karo shaqada uu yahay shahaadada MBA, shahaadada diblooma ee koorsooyinka tafaariiqda ayaa iska cad inay ka caawin karto inay helaan shaqo weyn waaxda. Iyaga oo leh khibrad ku filan, mushaaraadka, mushaarrooyinka iyo tas-hiilaadka kaleba aad bey u badnaan karaan.
Kuwani waa qaar ka mid ah waaxaha ugu caansan ee hadda soo jiidata musharixiin badan oo ajnabi ah fursado shaqo oo furan ayaa la bixiyaa. Waaxaha kale sida waaxda waxbarashada iyo IT-da sidoo kale waxay si weyn wax ugu biiriyaan bixinta fursadaha shaqo ee musharraxiinta ku habboon. Marka laga soo tago taas, adeegyada maaliyadeed iyo adeegyada la xiriira ayaa sidoo kale soo jiidata dalabyo waaweyn oo ka yimaada qarashyada caalamiga ah.
Talooyin ku Saabsan Sugitaanka Shaqada ugu Fiican Dubai
Dubai waxay sii wadaa inay tahay meesha ugu weyn ee soo jiidashada shaqo doonka shaqo doonka ah gaar ahaan faa iidooyinka aan la siin musharraxiinta. Dakhliga canshuur dhaafka ah, guud ahaan sicirka mushaarka, jardiinooyin badan iyo tas-hiilaad kale, fursadaha shaqo ee waaxyo badan oo Dubai ah ayaa si joogto ah kor ugu kacayay. Intaa waxaa dheer, iyada oo ah meesha ugu muhiimsan ee dalxiis loo tago iyo waddan soo koraya, waaxyo kala duwan ayaa u furay fursado fara badan musharixiinta daafaha dunida. Qeybaha ugu waaweyn ee gobolka waxaa ka mid ah dhismaha, dhismaha, suuq tafaariiqda iyo adeegyada maaliyadeed ee qeybo kale oo badan. Dubai sidaas darteed waxay siisaa fursad dhammaan kharashyada si loogu daro dar dar weyn ee garaafkooda shaqo oo lagu daro qaar ka mid ah waayo-aragnimada shaqo ee caalamiga ah si ay u bilaabaan shaqadooda. Hoos waxaa ku xusan qaar ka mid ah tilmaamaha lagu bilaabayo nidaamka codsiga shaqada ee shaqooyinka ku saleysan Dubai.
Doorashada bogga saxda ah
Macno malahan hadii codsaduhu yahay musharax heerka gelitaanka ama mid khibrad leh ilaa iyo inta ay dalbanayaan astaanta saxda ah. Waxaa ka mid ah waaxyo fara badan oo soo koraya oo ku sugan Dubai, waxaa lagama maarmaan ah shaqo-dooneyaasha inay ogaadaan waxa ku habboon. Wershad kastaa waxay leedahay waaxyo badan iyo qayb walba ka codsataa dalabaadka warshado badan. Sidaas awgeed waa muhiimadda koowaad ee shaqo dooneha inuu go'aansado go'aan adag. Waxay noqon kartaa wax jahwareer ku ah in murashax uu doorto. In kasta oo qaar badani rabaan inay ka shaqeeyaan warshado gaar ah sababta oo ah waxay rabaan, qaar waxay rabaan inay ku biiraan waax gaar ah maxaa yeelay waa loo tababaray. Sikastaba ha noqotee, shahaadooyinku wax badan ayey u yihiin shaqooyinka xirfadleyda ah ee Dubai iyada oo loo marayo shaqooyinka ku saleysan xirfadaha waxay noqon karaan xoogaa nasasho leh marka lagu jiro xaaladdan.
Inaad la xiriirto doorashooyinka qorista
Waxaa jira xulashooyin badan oo la heli karo shaqo doon kasta oo raba inuu shaqo ka codsado Dubai. Waxay ku biiri karaan shaqo EXPO taas oo sanadle ah lagu qabto waddamada waaweyn ee ay shaqo-bixiyeyaasha ka dhigaan shaqaaleyn fara badan oo ay ka mid yihiin Hindiya iyo dalal kale oo badan. Waxay xitaa iska diiwaan gelin karaan boggag internet oo kala duwan oo u heellan kuwa shaqo doonka ah ama iska fiirinaya kala soocida si ay u helaan fursadda ku habboon iyaga. Ikhtiyaar kale waxay noqon kartaa inaad soo booqato wakaaladaha shaqaaleynta kala duwan oo laga yaabo inay ku dallacaan xoogaa lacag ah adeegyadooda si sannadle ah. Hay'ado been abuur badan oo noocan oo kale ah ah ayaa ku soo beegmaya waqtiyada hadda socda taasoo adkeyneysa shaqo doonka inay ogaadaan cidda ay tahay inay aaminaan iyo sababahooda. Musharixiinta ayaa xitaa iska hubin kara bogagga rasmiga ah ee ururada waxayna dalban karaan jagooyin ku habboon oo ay weheliso warqad dabool ah iyo resumeyga oo bixiya faahfaahintooda oo dhan. Shabakad shaqsiyeed sida saaxiibada qaar, xubnaha qoyska ama dad kale oo aad horey u yaqaaneenba ka shaqeynta Dubai ama Abu Dhabi waxay noqon kartaa ikhtiyaar kale oo la tixgeliyo. Dadka shaqo doonka ah xitaa waxay aadi karaan Dubai si ay shaqsiyan u raadsadaan astaan ​​ku habboon oo la jaan qaada aqoontooda.
Inaad la timaado warqad daboolan oo weyn
Waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee nidaamka dalbashada shaqada. La imaatinka warqad dabool ah oo ku qasbeysa shaqaaleeyaha inuu xiiseeyo musharraxa waa howl aad u adag. Hay'ado ayaa la yimid oo bixiya adeegyadan oo kale iyadoo laga qaadayo khidmad adeeg. Diiradda ugu weyn ee xarafka warqadda ayaa ah inay ahaato laba waxyaabood oo aasaasi ah. Bilowga, u fiirsashada waa inay ahaato halka ay ku qoran tahay waxa musharraxa ka dhigaya mid ku habboon shaqada. Ka sokow taas, waxaa lagama maarmaan ah in sidoo kale la sheego sababta loo shaqeeyuhu u dooranayo shaqa doone gaar ah dhammaan murashaxiinta kale. Taas waxaa ka mid ah in la sheego faa iidooyinka dheeraadka ah ee loo shaqeeyuhu u rajeyn karo ku raaxaysiga inta uu qoreynayo musharraxa. Waxaa lagama maarmaan ah in looga jawaabo akhristaha warqadda daboolka inta ugu badan ee suuragalka ah, kaliya hab cilmi nafsi ah oo lagu xidho.
Ku soo noqoshada Resume weyn
Wixii codsi shaqo ah, waa Resume oo ka hadlaya musharraxiinta. Waa tallaabada ugu horreysa ee ay maamusho Maamulaha Kheyraadka Bani'aadminnimada si uu u barto shaqo raadiyaha. Resume waa inuu ku jiraa dhammaan faahfaahinta ku saabsan shaqo raadiyaha oo ay ku jiraan shahaadooyinka waxbarashada, khibradaha shaqo ee hore, koorsooyinka shahaadaynta, mashaariicda la sameeyey iyo faahfaahinta asaasiga ah ee kale. Inkasta oo qaabka resumeygu uu ku kala duwanaan karo waddanka ilaa waddanka, soo socota iyada oo dib-u-bogga bogga ah ee isweydaarsiga ah laga yaabo in uu noqdo doorasho xun Dubai. In kasta oo qiyaasta ay ku xiran tahay shahaadada iyo khibradda musharaxa, soo socota ugu yaraan dhowr bog ayaa noqon karta mid waxtar leh haddii aysan suurtagal ahayn in la yimaado saddex. Waxay lagama maarmaan u tahay dadka shaqo doonka ah in ay sheegaan runta oo dhan sida faanqeyrta ama waxyaalahaa ka baxsan waxay si dhakhso ah u diidi karaan musharaxa qofka shaqo doonka ah.
Haddii a qofka shaqo doonka ah wuxuu tagayaa Dubai si jir ahaaneed shaqo ugu raadsado, arrimuhu way kala duwanaan karaan oo xoogaa way sii yara adag yihiin maadaama aysan lahayn cid hageysa. Laakiin inta aad ka dalbanayso shabakadaha internetka, websaydhyada, bandhigyada ama wakaaladaha, musharixiintu waxay sugi karaan inay ku raaxaystaan ​​hagitaan ku saabsan qulqulka qumman ee nidaamka.
Wareysiyada Talo-bixinta ee Shaqo ee UAE
Wareysiga waa qeybta ugu muhiimsan ee codsigaaga shaqada. Ka dib marka aad ku xirto CV-ga ugu fiican, warqad daboolka, oo u muuji sida ugu dambeysa waqtiga kama dambeysta ah, waa inaad ka hor muuqataa guddi. Waraysi qaadayaashu waa inay qiimeeyaan awoodahaaga oo ay aasaasaan waxaad ku cadeysay CV-ga. Loo shaqeeyeyaal fara badan, shahaadada xirfadeed ayaa kaliya saldhig u ah nidaamka dalbashada. Nuxurka wareysiga waa in la hawl geliyo shaqaale suurtagal ah si loo baaro bal in shakhsiyadda iyo Awooda ayaa ku haboon dhaqanka shirkada iyo qaab dhismeedka.
Waa inaad adigu iskaa caddeysaa ka hor guddiga wareysiga. Sida aad naftaada u qaado marxalad kasta oo maalinta wareysiga ah, laga bilaabo daqiiqada aad u dhaqaaqdo albaabka ayaa go'aamineysa masiirkaaga. UAE waxay ka mid tahay waddammada ugu sarreeya adduunka oo si dhakhso leh u mideeya tikniyoolajiyadda. Waligiin ma ogaan kartid nooca wareysiga laguugu yeeri doono; loo shaqeeyayaasha qaar ayaa raba inay si lama filaan ah u soo jiitaan.
Loo-shaqeeyayaashu way ogyihiin in aad diyaar u tahay sida loo dhaqmayo loona hadlo laakiin waxay rabaan inay helaan shakhsiyaddaada dhabta ah. Loo-shaqeeye wuxuu u baahan yahay inuu ogaado sida aad uga jawaabayso jawi kala duwan. CCTV waa hiddaha aasaasiga ah ee wareysiyeyaashu, marna ma ogaan kartid meesha la dhigayo ama sida loo qorsheyn doono. Tani waa sababta aad u bilaabi laheyd dhar sax ah iyo isdhexgalka saxda ah qof kasta oo albaabbada ka mid ah. Iyadoo ay tahay inaad cilmi baaris ku samayso, marna ma ogaan kartid maamulaha ama qofka aad la kulmi doonto golaha.
Si kastaba ha noqotee, waa inaadan ka cabsanin wareysiga. Halkan waxaa ku yaal talo bixinno is-deji oo kalsooni lagu qabo.
Daraasad ku saabsan jagadaada
Waa inaad gaar u tahay jagada shaqada. Soo ogow waxa shaqadu u baahan tahay oo keliya xirfadaha caadiga ah ee warshadaha laakiin waxa loo shaqeeyuhu ka filayo qof inuu buuxiyo jagada. Marka laga reebo sharraxaadda shaqada, loo shaqeeyayaasha waxay rabaan shaqsiyad ku habboon booska. Xirfadaha xirfad-yaqaanku waa uun tilmaamaha waxa loo shaqeeyayaashu ku raadinayaan shaqada, waxay noqon kartaa xeerka labiska ama sida aad u hadasho. In kasta oo ay tahay inaadan iska dhigin oo aad xor u ahaatid cidda aad u shaqayso, waa inaad isbarbardhig ku sameysaa halbeega laga filayo.
Haddii ay suurtogal tahay, ka ogoow shaqaalihii hore ee isla goobtaas. Haddii aad khibrad u leedahay berrinka, waxaad fursad u haysataa inaad hesho shaqo. La tasho oo soo ogow sababta shaqaalihii hore uga tagay iyo heerkii waxqabad uu dalbaday loo shaqeeyaha.
Ku dar tan arintan. Hubi inaad ogtahay dhammaan waxyaabaha laga filayo.
Kala hadal khibradaada
Halkii aad ka fikiri lahayd xirfadaha xirfadeed iyo halka aad wax ku baratay, ka hadal khibradda shaqada. La wadaag waraystahaaga guulaha iyo caqabadaha goobta shaqada. Waa fursad aad ku caddeyso inaad naftaada ku habboon tahay shaqada sababta oo ah waad ogtahay waxa meesha ku jira. Caadi ahaan, loo shaqeeyeyaasha UAE waxay doorbidaan musharraxiinta khibrad wax ku ool ah oo gudaha ka ah. Haddii aad rajeynaysid inaad shaqo ka codsatid dhowr bilood gudaha UAE, xirfadaha ku-darista ah, oo aad hesho meel aad ku darto khibradaada, waxay muhiim u tahay shaqo-helista umadda carabta.
Dadka shaqo doonka intooda badani waxay khaladka u bartaan xirfadaha xirfad shaqo ee awoodda shaqo; waxqabadka goobta goobta shaqada waxay u baahan tahay codsiga aragtiyaha ku jira xaaladaha dhabta ah. Inta lagu guda jiro wareysiga, tani waa dhamaan shaqabixiyuhu rabo in uu maqlo. CV-gaaga ayaa horay kuu siiyay fursadda waraysiga; Sidaa darteed, u qaado fursad aad ku sharaxdo wax badan oo ku saabsan khibradaada adigoo u maraya khibrad. Wareysigu wuxuu ku saabsan yahay ku qancinta loo-shaqeeyaha aad taqaan waxa shaqadu u baahan tahay iyo ilaa hawsha.
Marka lagu daro sharaxaadda shaqada guud ee ku salaysan shuruudaha xirfadeed, waa inaad taqaanid filashada shirkadda. Doorkaaga gaarka ah marka aad ku biireyso kooxda.
Inkastoo wareysigu yahay wada hadal labo-wadaag ah, ha hadlin wax badan. U ogolow qofka waraysanaya in uu xakameeyo casharka sababtoo ah waxay yihiin martida. Inkastoo ay tahay inaad faahfaahin ka bixisid jawaabahaaga oo aad iska ilaaliso dhakamaynta, hadalka aad u badan wuxuu noqon karaa mid caajis u ah guddiga. Sidoo kale, waxaa loo turjumi karaa shakhsiyad awood leh, oo laga yaabo inay ku fiicnaado booskaaga shaqada. Inaad ka hadashid inta badan wareysi ayaa sidoo kale loo turjumayaa inaad tahay qof sabool ah markaad talooyin qaadato maxaa yeelay waxaad ku hadashaa wax ka badan dhageysiga. Guddiga waraysiga ayaa si fudud kuu qori kara inaad aragto shaqo aad u badan.
Ka sokow, waxaad si fudud u noqon kartaa mid aan khusaynin markaad wax badan kala hadli karto. Cunugaagu wuxuu ku dhejin karaa oo muujinayaa sifo aan loo baahnayn. Inkasta oo aad tahay inaad nasato oo aad la socodsiiso qofka ku wareysanaya, si xor ah ha u noqon. Waa dheelitir.
Noqo mid furan
Waa inaad ugu fiicnaataa dhinacwalba markaad waraysiga u socoto. Dabcan, waqti kuma luminaysid inaad wax baadho oo aad u labisto adiga oo rajeynaayo inaad shaqada seegto. Si kastaba ha noqotee, waa inaad diyaar u ahaato inaad aqbasho qaab kasta oo ra'yi celin ah. Waxba kama muuqato gudaha UAE suuqa shaqada. Haddii aad shaqo weydo micnaheedu maahan inaad ku filnaatid sinaba. Waxay noqon kartaa hal jago isla markaana waxaad tahay dhowr murashax sidaa darteed mid ayaa laga tagaa. Maskaxda qalbi furan waxay kaa caawineysaa inaad ka fogaato rajo beel, taas oo aan dan u aheyn loo shaqeeyayaasha UAE.
7 Waxyaalaha Shaqo raadiyaha ee UAE waa inuu ogyahay
UAE waxay leedahay fursado shaqo oo qaali ah. Si kastaba ha noqotee, in shaqo laga helo umadda carabta ma cada. Waa inaad fahanto dhaqanka, shuruudaha gaarka ah ee loo shaqeeye kasta, oo aad u soo bandhigtaa warqaddaada daboolka sida ugu wanaagsan ee suuragalka ah.
Ka sokow aragtidaada xirfadeed, waxaa muhiim ah in la fahmo jawiga iyo waxa laga filayo maaha oo kaliya loo shaqeeyaha laakiin sidoo kale warshadaha iyo dhaqanka. Sidoo kale, waa inaad barataa jawiga sharciga ah si looga fogaado wixii dhacdooyin ah inta aad raadineyso shaqo.
Waa kuwan waxyaabo muhiim ah oo ay tahay inaad ogaato:
Adigoo shaqo raadsanaya, tani waxay u badan tahay inay kaa fogtahay aduunkaada. Hada, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa shaqo iyo mushahar soo jiidasho leh. Si kastaba ha noqotee, waxaad ugu dhakhsaha badan u imaan doontaa xaqiiqda inaad u baahan tahay inaad nasato ama ugu yaraan nasasho noqoto. Gaar ahaan, markii aad tahay qof dalxiis ah, fasax waa muhiim. Shirkadaha badankood ee ku yaal UAE waxay u oggolaadaan maalmo taariikhi ah ee 30 sida fasax sannadeedka loogu talagalay qurbaha. Waxaa lagu siin doonaa lacag-bixinnada ciidaha dadweynaha, oo aan ka tirsanayn maalmaha 30. Fasaxa jirada looma xisaabayo maalmaha 22 ee maalmaha shaqada ee fasaxa lacag bixinta.
Waa lagama maarmaan in lala socdo maalmaha fasaxa ah si loo qorsheeyo booqashadaada, iyada oo aan loo eegin masaafada u dhexeysa wadankaada hooyo. Aqoontaas waxay kaa caawin doonaan inaad ka hortagto mawduuca si aan fiicnayn loo-shaqeeyahaaga.
UAE waa umadda carabta sidaa darteed adeegsiga ballaaran ee Carabiga oo ah luuqada rasmiga ah ee shirkadaha shirkadaha. Waxaad luqadda kala kulmi doontaa heshiiska shaqada si aad u kireysato heshiiska hoygaaga. Waxaad noqon doontaa deganaan badan hadaad fikrad afka ka leedahay; sidaa darteed, waxaa xikmad badan inaad barato luqadda qayb ahaan ama gebi ahaanba ka hor intaadan u guurin UAE. Waxay noloshaada kuu fududayn doontaa.
Si kastaba ha ahaatee, Imaaraadku waa dal la wadaago oo leh xoog ay ku shaqeeyaan shisheeye. Ingiriisiga, Urdu, Hindi, iyo Farsi waxay ku badan yihiin luqadaha kale ee qalaad. Sidoo kale, inta badan shirkadaha warshadaha soo-booqda oo ay ku jiraan shirkadaha diyaaradaha iyo suuqyada ayaa u baahan shaqaalaha inay bartaan luqado dhawr ah.
VISA iyo Passport
Baasaboor ahaan, Baasaboorku waa shuruud aasaasi ah. Ka sokow, waxaad u baahan tahay UAE VISA, ha noqoto dalxiis ama booqasho uun. Tani waxay kuu horseedi doontaa inaad gasho UAE. Waxaa lagaa doonayaa inaad heysato ogolaansho shaqo ugu yaraan 3 bilood kahor imaanshahaaga. Ogolaansho shaqo oo joogto ah ama fiiso ayaa la soo saari doonaa goor dambe haddii aad shaqo aaminto. Waqtiga dheer ee ogolaanshaha wuxuu ku xirnaan doonaa heshiiskaaga.
Ka dib markii la helo shaqo waqti buuxa ah oo ku noolaanshaha deganaanshaha Imaaraadka, saygaaga / xaaskaaga wuxuu si toos ah u heli karaa shaqo waqti-dhiman ah iyo oggolaansho shaqo si aad uga shaqeyso UAE.
Ahaanshaha ummad Carabi ah, Diinta islaamku waa diinta islaamka magaalooyinka badankood. Waa diinta rasmiga ah. Waxaad ubaahantahay inaad baratid aasaaska diintooda si aad iskaga ilaaliso inaad carqalad ku noqoneyso loo shaqeeye mustaqbalka. Uguyaraan ha ku bilaabin is gacan qabsi dumarka, waa wax aan habooneyn. Si kastaba ha noqotee, loo shaqeeyayaasha magaalooyinka waaweyn sida Abu Dhabi iyo Dubai ayaa dejisa oo xushmeeya diimaha kale.
Mid ka mid ah sababaha UAE ayaa caan ku ah xirfadlayaasha iyo soo jiidashada shaqaale weyn maalin kasta waa sababtoo ah nidaamka canshuuraha bilaashka ah. Canshuur la'aan. Qiimaha sare ee ku nool magaalooyinka waaweyn sida Dubai waxaa loo aaneynayaa boqolkiiba dheeraad ah ee khidmadda adeegga. Waxay caan u tahay shirkadaha warshadaha martigelinta inay ku daraan celcelis ahaan 10% kharashka biilasha. Kabuubka maaha mid caadi ah ee Imaaraadka sababtoo ah boqolkiiba qiimaha dheeraadka ah ee biilasha. Si kastaba ha noqotee, waa inaad biilashaada ku hubisaa wakhti kasta iyo calaamadda markii loo baahdo, khaasatan marka kharashka adeegga laga reebo.
Imaaraadka wuxuu ku shaqeeyaa siyaasadaha. Haddii aad ku jirtid dhinaca qaldan ee sharciga, ha ahaato shirkad ama deegaan, hubi inaad bixiso ganaaxyo badan oo aan loo hoggaansamin. Maamullada maxaliga ah waa kuwo adag; wax heshiis ah laguma gaarin iyadoo aan loo eegin shaqadaada. Shaqo raadiye, waxaa laga yaabaa inaad dooneyso inaad iska ilaaliso kharashyada aan loo baahneyn ama diiwaanka liita oo laga yaabo in ay ku lug yeeshaan CV-gaaga. Loo-shaqeeyayaashu waxay jecel yihiin anshaxa iyo anshaxa. Ha qashin ama ha ku dhuuqin meel kasta, sharciyada UAE waa adag yihiin!
Xaqiiqda taas UAE waxaa lagu maareeyaa siyaasadaha iyo shuruucda adag, waa mid ka mid ah waddammada ugu nabdoon in ay ku noolaadaan sidii qurbo-joog. Sidoo kale, Islaamku sida diinta rasmiga ahi waxay u baahan tahay anshax iyo bulsho hagaagsan. Imaaraadku wuxuu leeyahey dambi aad u yar sababta oo ah dhaqanka, diinta, iyo sidoo kale ciidamada xoojinta sharciga. Wadanku wuxuu maal galiyay qaybo amni iyo qalab tikniyoolajiyadeed si kor loogu qaado amniga gees walba oo magaalada ah. Xaqiiqdii, jawiga nabdoon ayaa ah sababaha ugu badan ee keena kordhinta shaqaaleynta wadanka.
Iska ilaali inaad xirato dhar muujinta dadweynaha; Waxay ka soo horjeedaa dhaqanka iyo diinta. Waxaa loo tixgeliyaa weerar. Sidoo kale, ku dabaasha kaliinka xeebaha dadweynaha ayaa kuu sheegi kara khatarta.
Ku biir xoogagga UAE ka dib markii la ogaado sababahaas!
Sidee loo Gudbiyaa Wareysiga Shaqada ee UAE
UAE waxaa ka buuxa fursado shaqo oo ku yaal goobo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, qof kasta ma shaqeyn karo dalka Carabta, kaliya kuwa yar yar ee ogaanaya laylinta waraysiyada shaqada. Tartanka sii kordhaya ee shaqooyinka UAE ayaa ka dhigaya geedi socodka wareysiga in uu muhiim u yahay in uu shaqo helo. Waa marxalad muhiim u ah shaqo raadinta; waa inaad ka baaraandegtaa baahiyaha iyo shuruudaha loo shaqeeyaha oo u dhaqmayo si aad udheeraato beertaada. Inkasta oo tartanka ay adkeyneyso in shaqo la helo, haddana waxay fursad u siineysaa shakhsiyaadka aqoonta leh inay si fudud ugu qanciyaan loo shaqeeyaha.
Sida aad u qorto una soo bandhigtid resumeygaaga waa qayb muhiim ah. Laakiin taasi waa uun liiska looyaro, marxaladda ugu muhiimsan waa wareysi. Tani waa markaad tahay inaad siiso ugu fiicnaanta inaad ku qanciso loo-shaqeeye. Waa fursad aad ku caddeyn karto macquulka ah waxa aad ku sheegtay CV.
Ka gudubka waraysiga waxaa ku badan wax ka badan baadhitaanka su'aalaha wareysiga suurtagalka ah. Sida iska cad, waa inaad barataa taariikhda iyo dhismaha shirkad aad codsaneyso. Waxay muujinaysaa dulsaar iyo ballanqaad ganacsi shirkadeed. Inta badan dadka shaqo doonka ah waxay ka maqan yihiin qayb muhiim ah oo waraysiyada, isgaarsiinta; badanaaba waa la qaldamaa oo kaliya ka jawaabista su'aalaha.
Wareysigu waa inuu noqdaa mid laba dhinac ah; waa inay noqotaa isgaadhsiin dhex-dhexaadiyaha iyo shaqo raadiyaha. Xaqiiqdii, waa inaad weydiisaa su'aalo kaa caawiya inaad sameyso go'aanka saxda ah. Inkasta oo qof kastaa uu ka walaacsan yahay ka hor, inta lagu guda jiro, iyo wareysiyada kadib, diyaarinta ku filan waxay kaa caawineysaa inaad kalsoonidoonto oo aad shaqo hesho
Waa kuwan dhowr talooyin oo kaa caawinaya habka loo marayo:
Ku haboon dhar
Dharka ayaa leh wax walba oo la sameeyo dareenka hore, taas oo saameyn ku yeelata aragtida wareysiga. Caadi ahaan, dadku waxa loola jeedaa inay xirmaan rasmi ahaan. Dumarka waxay xirtaan dharka midabkoodu midabkiisu yahay dhexdhexaad iyo midab leh iyadoo raga ay xiran yihiin ganacsiga. Tani waa muhiim laakiin waa saldhigga kaliya ee lagu riyaaqayo wareystaha. Waa inaad tagtaa dharka caadiga ah; caqli yeelo oo ogow koodhadhka dharka ee shirkadda. Loo shaqeeyayaashu waxay ku kala duwan yihiin doorashooyinka dharka.
Dhaqanka ayaa muhiim u ah dadka ku nool UAE. Dharku waa qayb muhiim u ah dhaqanka; Tani waa inay noqotaa meesha aad ka bilaabi lahayd sameynta aragti hore. Raadi jilitaanka ururka oo si habboon u xir. Shaqo-bixiyuhu wuxuu xiiseyn karaa adiga oo kaliya sababtoo ah waxaad u labistaan ​​sida ay rajeynayaan.
Weydii nafsadaada kahor wareysiga
Dadka badankood way ka walaacsan yihiin nooca su'aalaha laga yaabo in laga yaabo in wareysiga laga yaabo. Waa walaac guud; helitaanka jawaabta saxda ah sida laga filayo filashada qofka wareysanaya. Su'aal caadi ah oo ka yimaada wareysiyeyaashu waa waxa kuugu dhiiri geliya inaad hesho goob gaar ah. Fursadaha shaqadu waxay ku kala duwan yihiin shuruudaha xirfadda. Waxaad ubaahan tahay inaad si joogto ah ugu qanciso cidda aad u shaqayso sababtoo ah shaqo-bixiyeyaasha ugu sareeya waxay kugu xirayaan baaritaan. Diyaar garow.
Sidoo kale, falanqaynta xooggaaga, daciifnimada, fursadaha, iyo hanjabaadaha ku salaysan heerarka warshadaha. Waxaad heleysaa waqti fudud oo laga jawaabo su'aalaha wareysiga sida uu u baahdo waraystaha kaasi oo ah fursado badan oo ah helitaanka shaqo. Waa inaad taqaanaa nooca loo shaqeeyaha ee ku habboon xirfadahaaga. Naftaada oo la siinayo loo-shaqeeyaha saxda ah wuxuu kordhiyaa fursadaha helitaanka shaqo ee UAE.
Marka hore, waa inaad maskaxda ku haysaa inaad ku jirtid dhulka Carabta oo aad ogaatid asaasiga ah waxa ay u arkaan xaq iyo khaldan. Xusuusnow wareysiga wuxuu ku saabsan yahay sameynta aragti. Dhab ahaan, waa inaad ku qancisid loo-shaqeeyaha shahaadooyinkaaga oo aad ku daboosho warqad ka hor inta aysan kuugu soo qorin waraysiga. Si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan yihiin inay hubiyaan shakhsiyadda iyo dabeecada shaqsi ka hor inta aan shaqaaleyn. Tani waa sababta wareysiyada ay yihiin marxalada ugu dambeysa ee muhiimka ah ee habka qorista.
Marka laga reebo dharka si habboon, doorasho ereyga habboon, iyo ilaalinta wejiga quruxda badan, waa in aad si qotodheer u noqotid dhaqanka Carabi. Inkastoo isgaadhsiintu ay tahay ficil noocaas ah, waa wax aan habboonayn in la is-gacan-galiyo si looga hortago galmada. Waxaad ka fiicnaan doontaa inaad sugto iyaga si aad u bilowdo gacanta isgaadhsiinta. Sidoo kale, dhaqanka Carabi waxa uu tixgelinayaa caqli haddii aad diiddo dalab cabitaan ah. Marka laguu soo bandhigo kafeega, shaaha, ama galaas biyo, hubso inaad soo qaado.
Fikradaha caadiga ah ee akhbaaraadka waxaa ka mid ah sugitaanka wareysiga si uu u bixiyo kursi, ilaalinta indhaha indhahiisa oo dhan ee guddiga, iyo ilaalinta codka dhexdhexaad ah marka laga jawaabayo su'aalaha. Ha ku fadhiisan kursigaaga inta lagu jiro waraysiga, fadhiiso toos. Iska ilaali dhaqdhaqaaqa jidhka sida xad-dhaafka iyo gacmaha inta lagu jiro waraysiga. Sida qaybo kale oo adduunka ah, ha isticmaalin telefoonka gacanta inta uu ku jiro wareysiga UAE, waxaa loo arkaa ixtiraam la'aan.
Baro mushaharka mushaharka
Sida iska cad, maahan midka kaliya ee ku qoran xariijinta qorista. Waxaa suurtogal ah, qaabka kaliya ee adiga kaa soocaya musharraxiinta kale waa mushaarka. Inkastoo ay tahay inaad tixgeliso waayo-aragnimadaada iyo baahidaada markaad sheegeyso mushaharka, waa in aad caqli-gal tahay inaadan sheegin wax ka badan sicirka suuqa.
Waraysiga wareysiga wuxuu ku saleysan yahay baaritaan habboon.
Ka shaqeynta Macallinimada UAE
Ka shaqaynta UAE waa waayo-aragnimo xiiso leh haddii aad rabto inaad ka shaqeyso guriga. Waxaa jira fursado badan oo shaqo ah iyo dalxiisayaasha ajnebiga ah ee ku yaala UAE haddii aad diyaar u tahay oo aad haysato waraaqaha aad ugu qalanto. Dad badan oo British ah, Maraykanka, Kanadiyaanka, iyo Shiinaha oo ka mid ah kuwa kale, waxay ku guulaysteen in ay qaataan shaqooyin aan xadidnayn ama wax dhib ah. Thanks to siyaasadaha iyo xeerarka, waxaa jira mushahar macquul ah oo la heli karo.
Waxbarashada shaqooyinka ayaa ka mid ah kuwa ajinebiga ah ee ugu badan ee ka shaqeeya UAE. Sababta ayaa ah dawlada Emirates ayaa ku hanjabtay dadaalkeeda ku aaddan horumarinta nidaamka Waxbarashada ee Emirati. Dhisidda bulshada aqoonta ku leh adduunka ee Carabta ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu jaan-gooyo jiilalka mustaqbalka iyada oo ay ku qaadato dhaqaalaha waara. Qiimaha maadiga ah ee tilmaamaya qaranku waxa uu doonayaa in uu abuuro qiyamka aadanaha iyo u heelanaanta xirfadnimada iyo hufnaanta. Si arrintan loo sameeyo, helitaanka xoog shaqaale oo la isku halleyn karo ayaa qayb muhiim ah ka ah hannaanka si loo gaaro himilada
Dugsiyada Dawladdu waa meesha lagu xalliyo istaraatijiyadaha. Iyadoo la tixgelinayo tan, shaqadu way sarreeysaa marka loo baahdo. Dawladdu waxay diyaar u tahay inay si xoogan u maal gashato shaqaale shisheeye si kor loogu qaado nidaamka waxbarashada. Dugsiyada dadwaynaha waxay heleen maalgalin ballaaran waxayna qoondeeyeen qeyb muhiim ah oo ka mid ah miisaaniyadda qaranka si ay caruurtu u siiyaan fursad ay ku helaan dugsiga ugu fiican.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu hormariyo nidaam cusub oo loogu talagalay in carruurta loogu diyaariyo bulsho casri ah oo casri ah. Si tan loo sameeyo, Wasaaradda Waxbarashada ayaa kordhisay xoojinta barnaamijka Ingiriisiga Dhexdhexaadinta Dhexe. Sidaa daraadeed, Ingiriisku waxaa la baraa heerarka kala duwan ee nidaamka. Waxay ka mid tahay maadooyinka muhiimka ah oo ay la socdaan xisaabta iyo sayniska. Kuwa kale ee liiska ku jira waxay yihiin maadooyin aqooneed oo la taaban karo sida Ganacsiga iyo Ganacsiga, Waxbarashada Jirka, Xirfadaha Nolosha, Sayniska Kombiyuutarka, iyo Teknolojiyada Naqshadaynta. Waxaa la siiyaa inta udhaxeysa XADANKA 10-12 waxayna horey u yeeleen saameyn weyn dadka.
Marka laga reebo guriga, barashada UAE waa fursad faa iido badan oo maanta ah. Waxaa jira waxyaabo badan oo ay ku bartaan kana faa'iideystaan ​​ka shaqaynta UAE in aanad ku seegin haddii aad doonayso inaad halkan ku noolaato sida dalxiis.
Shuruudaha macallimiinta ayaa ku kala duwanaanaya booska su'aasha. Waxay sidoo kale si isdaba joog ah u habeynayaan halkan. Si kastaba ha noqotee, shuruudaha guud ee u hoggaansamaya xeerarka;
Bachelor's Degree ee Waxbarashada Carruurnimada Hore ama shahaadada la xidhiidha hay'ad la aqoonsan yahay
Haysashada Shatiga Waxbarashada
2 sano ee waayo-aragnimadii hore ee barashada xannaanada ama Bilowga Sanadka Hore ka hor codsiga
Si aad u barato shaqo barashada Ingiriiska, waxaad u baahan tahay shuruudaha soo socda
Aqoonsiga CELTA ama Waxbarashada Aqoonsiga / Liisanka
2 sano oo khibrad waxbarasho oo hore
Diyaargarowga shaqada ee UAE waxay u baahan tahay dukumentiyo ku filan sida waafaqsan sharciga dalka. Xaqiijinta dukumeentiyadaadu waa tallaabada ugu muhiimsan ee ku aaddan geeddi-socodkan. Fiisaha shaqada waa tikidhkaaga si aad u hesho xuquuqda iyo mudnaanta ama xaaladda shaqo. Tani waa shuruud muhiim u ah ajaanibta doonaya inay shaqo helaan. Waxaad soo gali kartaa Emirates booqasho ama dalxiis dalxiis laakiin waxaad u baahan doontaa inaad ku wareejiso xaaladaada fiisada markaad heshay shaqo. Inta badan ajaanibta ee Dubai lagama rabo inay qaataan fiiso ka hor intaanay iman. Waa inaad sidoo kale ka digto in dalkaaga asalkiisu uu door ka qaato go'aanka ka-dhaafitaanka. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah muwaadiniinta haysta fasax ah inay haystaan ​​fiisooyinkooda UAE maalmaha 90 waxaa ka mid ah dadka asaliga ah, Ingiriiska, Kanadiyaanka, iyo Shiinaha.
Ka shaqeyn la'aanta fiisada shaqada ku habboon laguma talin karo sababtoo ah waa halis. Haddii la qabto, waxaad ku jiri doontaa dhibaato haddii aanad laheyn. Haddii kale, waxaa lagaa doonayaa inaad wadanka ka baxdo marka uu dhaco fiisadaada. Nasiib wanaag, markaad shaqo helayso, loo-shaqeeyahaagu wuxuu bilaabi doonaa habka fiisaha adiga oo sidaas darteed maaha inaad ka walwasho. Shirkaddu waxay qaadi doontaa hawsha. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad soo gudbisaa dukumintiyada rasmiga ah sida lambarkaaga baasaboorka si aad u bilowdo hawsha. Tani waa, si kastaba ha ahaatee, dhammaantood ma ahan inay qaadato fiisada shaqada.
Dawladda Emirati ayaa balanqaaday in ay kor u qaadi doonto daryeelka dadkeeda ayaa horseeday in la baro shaqooyinka barayaasha. Tani waa fursad wayn oo ajnabiyeyaashu u raadsadaan shaqooyin sababtoo ah ciriiriga iyo tartanka dib u celinta guriga. Haddii aad rabto inaad ka dhigto midka ugu fiican noloshada sida ka soo jeeda UAE, waxaad sidoo kale haysataa fursad wanaagsan oo aad lacag ka bixisid tan. Iyadoo aan loo eegin sababahaaga aad ugu guurto UAE, waxaad ka faa'iideysan kartaa gunnooyinka la socda. Tusaale ahaan, waxaad u guuri kartaa qoyskaaga fasaxyada si aad ugu raaxeysid qurxinta quruxda aan xadidnayn ee ugu dhaqsaha badan dalka Carabta.
6 Waxyaabaha Muhiimka Ah ee Lagu Ogaado Marka Uu Shaqeynayo UAE
Fikradda ah inaad ka shaqeyn karto dalkaada hooyo waxay noqon kartaa cabsi. Si kastaba ha ahaatee, UAE waxay bixisaa khibradaha ugu xiisaha badan ee ajinebiga. Iyada oo aan loo eegin dhinaca xirfadlahaaga, waxaa jira fursado badan oo ka mid ah dalka Carabta. Tani macnaheedu maaha inaad si toos ah shaqo u heli doonto; waa inaad ka baartaa shaqo-bixiyeyaasha kugu habboon oo aad ku wareejiso wareysiga shaqo-raadinta si aad u xaqiijiso shaqo lacag badan oo ka shaqeysa UAE. Si kastaba ha noqotee, degitaanka dalka oo dhan shaqaale waqti buuxa ah ayaa qaadata wax ka badan mushaharka soo jiidashada iyo amniga shaqada.
Waa inaad barataa siyaasadaha shirkadaha iyo tan ugu muhiimsan xuquuqdaada. Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee aad tahay inaad hubiso saacadaha shaqada, fasaxyada, iyo heerka mushaharka caadiga ah. Haddii aad hore u joogtay dalka ama qorsheynayso inaad u guurto shaqo raadin, waa muhiim inaad xasuusato arrimaha soo socda.
Sharciga UAE wuxuu ka doonayaa loo-shaqeeyayaasha in ay bixiyaan kharashyada oo dhan oo la xiriira safarka iyo qorista. Martiqaad waraysiga, waa in aanad ku dhibin qiimaha tikidhada diyaaradaha iyo fiisaha soo gelista ee UAE. Waa mas'uuliyadda loo shaqeeyaha. Khidmado kasta oo la xariirta hay'ad shaqaalayn ayaa sidoo kale lagu bixinayaa loo-shaqeeyahaaga mustaqbalka. Inta badan dadka ajnebiga ahi kama war qabaan siyaasaddan taas oo ay ka faa'iideysanayaan loo-shaqeeyayaasha. Xaqiiji in hay'adda shaqaalaynta ee su'aashu ay tahay mid lagu aqoonsan karo dawlada wadankaaga hooyo si aad uga fogaato wixii dhacdooyin ama dhacdooyinka soo noqnoqda shakhsiyaadka xun.
Waa inaad barataa dhamaan shuruudaha iyo shuruudaha heshiiska shaqada. Qaado waqti aad ku akhrido shay kasta oo ku qoran heshiiska oo hubi inay udhaxeyso dalab shaqo. Ka shaqee cidda aad u shaqayso ama wakaaladda qorista ee wax kasta oo aan caddayn ama aan aqoon. Tani waa in la sameeyaa ka hor inta aanad qorsheynin inaad u safartid UAE, wax walba oo aad fahamtaan.
Eeg cinwaanka shaqada, mushaharka, iyo masuuliyadaha gaarka ah sida sharaxaadda shaqada. Waa inaad ku kalsoonaataa mid kasta oo ka mid ah mas'uuliyadaha waana inay ahaadaan kuwo isbarbardhigaya xirfadahaaga. Waxaad xor u tahay inaad weydiiso haddii aadan hubin mas'uuliyadaha qaar, ha u qaadan in loo-shaqeeyuhu ku siin doono tababar. Saxeexa macneheedu waa inaad oggolaato oo karti u yeelato wax kasta oo ku qoran heshiiska shaqada.
Iskutallaab ku saabsan heshiiska shaqaalaynta la soo jeediyay, waa inay ahaadaan kuwo caqligal ah.
Kadib markaad hesho shaqo-helid iyo qandaraas shaqo oo dhamaystiran, samee dhowr nuqul oo dukuminti ah. Shahaadooyinkaaga iyo dukumintiyada kale ee muhiimka ah oo ay ku jiraan caymisku waa inay sidoo kale ku jiraan nuqulo Waa taxadar in laga fogaado lumitaanka ama waxyeellada. Dhammaan dukumiintiyada la xiriira shaqada waa inay sidoo kale ku jiraan dhowr koobi. Xataa ka dib markaad shaqada hesho, hayso dukumiintiyada ammaan. Marna ma ogid!
Ka shaqeynta qoraalka
Markaad timaaddo UAE, waa masuuliyadda shaqaaleeyaha in uu kugula shaqeeyo dalka aadna hubiso in lagu dejiyo. Kharashka wax-qabadka ee leh oggolaanshaha socdaalka iyo shaqada waa in loo-shaqeeyahaaga wax ka qabtaa. Xaaladaha intooda badan, waxaa lagaa doonayaa inaad tagto baaritaan caafimaad, oo ku saabsan khidmadaha waa in ay bixiyaan loo shaqeeyaha. Ogolaashaha degenaanshaha sidoo kale waa qayb ka mid ah mas'uuliyadda loo-shaqeeyaha. Tani waxay la mid tahay sharciga shirkadaha UAE haddii shaki ku jiro, la tasho hay'adda shaqaaleynta ama loo shaqeeyaha intaadan safrin.
Lacag kasta oo kasta ha ahaato hudheel ama alaab iibsi, risiidhada waa in lagu hayaa. Sharciyada Imaaraadka ayaa ah kuwo gaar ah oo adag oo ka dhan ah musuqmaasuqa iyo wixii kale ee la xiriira arrimaha. Sidoo kale, waxay kaa caawin kartaa inaad caddeyso masuuliyada iyo xisaabtankaaga loo-shaqeeyahaaga. Marka laga soo tago ajandaha shaqo raadinta, waa ficil fiican oo loogu talagalay xisaabtanka shakhsi ahaaneed. Had iyo jeer hayso risiidhada si aad u calaamadiso kharashyadaada.
Sidoo kale, dukumintiyadaada shakhsiyeed waa mid ammaan ah. Marnaba ma ogaan kartid marka sharciga lagaa rabo inaad soo saarto, markaad tixgeliso inaad tahay dalxiis. Dabcan, markaad timaado, loo-shaqeeyahaaga iyo ururrada kale ee sharciyeynta waxay u baahan doonaan inay xaqiijiyaan aqoonsigaaga iyo kalsoonidaada adoo waydiinaya baasaaboorkaaga, fiisada, iyo ogolaashaha shaqada. Dukumeentiyada ayaa sidoo kale looga baahan yahay markaad dalbato ogolaanshaha degenaanshaha ee loo-shaqeeyahaaga.
Hubi inaad dukumentiyada ka soo qaadato ogolaanshahaaga. Waa inaad marin u hesho dokumantiyada mar kasta.
Ka warbixi xadgudubyada
Markii uu yimaado UAE, loo-shaqeeyuhu waa inuu daryeeli dhammaan dokumentiyada wax-qabadka. Toddobaad gudahiis, loo-shaqeeyuhu waa inuu kuu soo bandhigaa qandaraas shaqo oo dhamaystiran. Heshiiska waa inuu ahaadaa mid la mid ah sida dalabka asalka ah. Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaysan jirin shaqo dhab ah oo loo-shaqeeyuhu uu leeyahay ujeedooyin kale oo jirran. Ha sugin todobaad kale si aad ula qabsatid loo-shaqeeyaha haddii aad dareentid wixii xadgudub ah ama been-abuur ah ee shaqo-bixinta. U wargali Xafiiska Shaqada si dhaqso ah iyo caawimo. Sidoo kale, waa inaad u sheegtaa loo-shaqeeyaha haddii ay ku fashilmaan inay bixiyaan mushaharkaaga oo buuxa ama waqti ahaanba sida ku xusan taariikhda la isku raacay iyo cadadka heshiiska shaqada.
Marka laga reebo rajooyinka loo-shaqeeyaha, waa inaad ogaataa xuquuqdaada sida uu dhigayo sharciyada UAE.
Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato ku shaqeynta UAE
Haddii aad qorsheyneyso inaad ka shaqeyso UAE, waxaa jira waxyaabo badan oo tixgelin leh ka hor intaadan u dhaqaaqin Carabta caanka ah ee Carabtu. Haddii aad ka timid UK, USA, Canada, iyo dalal kale oo fiiso la dhaafay, waxaad u taagan tahay fursad wanaagsan oo aad ku hesho shaqo. Qaar badan oo ka qalin-jabiya dalalkan waxay doortaan inay la shaqeeyaan shirkado caalami ah, oo leh laamo waddankoodii ku yaal. Tani waa fursadda ugu wanaagsan ee ay leeyihiin si ay u sugaan shaqooyinka iyo xafiisyada. Sidoo kale waa fursad looga faa’ideysto dakhliyada canshuur la’aanta si loo kordhiyo dakhliga saafiga ah.
Marka hore, aan sahaminno nidaamka helitaanka shaqada UAE
Inaad shaqo ku hesho UAE
Qarankan caanka ah ee Carabta ayaa leh wax badan oo loogu talagalay dadka dalxiisayaasha ah iyo kuwa soo booqda ee doonaya inay degaan halkan. Waa meelo laxaad leh oo degaan gaar ah leh oo asal u ah astaamaha xarumaha magaalooyinka soo-kobcaya ee soo kobcaya oo leh habab casri ah oo casri ah. Tani waxay sidoo kale macnaheedu tahay in ay jirto baahi weyn oo loo qabo shaqaale xirfad leh. Dubai, tusaale ahaan, waxay bixisaa fursado badan oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah si ay u kordhiyaan dhaqaalahooda gobolka. Heshiiskani faa'iidooyinka labada dhinacba wuxuu ka caawiyaa dalka in uu ka faa'iideysto aqoonta iyo ilaha dhaqaale inta aad heleyso dakhliga aad doonaysid.
Inkasta oo Imaaraadka Carabta ay ka mid tahay dalalka ugu dheellitiran ee aad abid heli kartid, waxaa jira waxyaabo badan oo wax loo barto. Waxaad u baahan tahay inaad fahamto qiimaha dhaqanka iyo diinta, sababtoo ah si aad ah ayey u qaadaan halkan. Diinta iyo dhaqanka guudba waxay ku dhex jiraan qeexitaanka nolosha maalin kasta. Barashada dhaqanka dadka iyo habka guud ee waxqabadka ayaa kaa caawin doona inaad si fudud u xallilato.
Ku saabsan shaqada; inta badan dalxiisayaashu waxay ka shaqeeyaan saldhigga qandaraaska ee hoos imaanaya kafaala-qaadka. Tan ugu muhiimsan, dakhliga aan canshuur-la'aanta ahayn waa mid aan la adkeyn karin. Waxaa sidoo kale jira lacag bixinta adeegga baxnaaninta kadib dhammaadka qandaraasyada.
Xagee ka shaqeeyaan UAE
Haddii aad ka warwarsan tahay halka aad ka shaqeyso Imaaraadka, waxaad u baahan tahay inaad sameysid xoogaa cilmi baaris ah. Tixgeli xaqiiqda in warshadaha ugu waaweyni ee UAE ay soo jiiteen shaqaale aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha dunida. Kheyraadka dabiiciga ee batroolka dabiiciga ah wuxuu awood u siiyay dhaqaalaha qaranka inuu soo saaro kobaca ugu weyn ee abid la arkaayo. Tan koritaanka ayaa gobolka u beddelay goob dalxiis oo weyn oo loogu talagalay dadka adduunka oo dhan. Waxay sidoo kale u diyaarsan tahay inay noqoto meel ganacsi qaali ah oo caan ah mustaqbalka. Hordhaca Koobka Kubadda Cagta Adduunka wuxuu sidoo kale muujinayaa ahmiyadda gobolku u leeyahay dunida inteeda kale.
Maanta, tani waa xarun ganacsi oo istiraatiiji ah ee Gacanka Ciraaq waxayna keentaa adduunka oo ah soo dejinta iyo dhoofinta. Tusaale ahaan, inta badan cuntada la cuno halkan waa la keenaa. Tani waxay ka dhigan tahay ganacsi weyn shirkadaha ku xareeya cuntada dhakhso ah fursado kale.
Warbixinta maaliyadeed ee ugu dambeysay waxay muujineysaa horumar weyn gaar ahaan ka dib hoos u dhicii caanka ahaa ee 2008. Waxay horseed u noqotay kala-duwanaanta suuqa, oo markii hore salka ku haysay sicirka saliidda iyo guryaha. Sicirka saliida ee isbeddelaya wuxuu noqday wicitaan baraarujin ah oo lagu faafinayo waaxaha kale si loo sugo waaxda bangiyada burburay. Bangiga iyo maalgashiga, ganacsiga iyo ganacsiga, iyo sidoo kale dalxiiska iyo madadaalada ayaa noqday isbedelka cusub ee Expo 2020 UAE.
Dubai waxaa lagu yaqaan kharashka raaxada iyo wax kasta oo isbeddel ah ee geedi socodkan wuxuu saameynayaa UAE heshiis weyn. Maalgashiga dhaqaalaha kala duwanaanshaha ayaa noqdey waddada nabdoon ee dhibaatada. Marka laga reebo shidaal batroolka iyo warshadaha kiimikada, waxaad sidoo kale haysataa fursad aad uga shaqeyso kalluumeysiga, qalabka dhismaha, aluminium, dayactirka markabka ganacsiga, farsamooyinka, sibidhka, iyo shirkadaha bacriminta.
Dalbashada Shaqada UAE
Bariga Dhexe wuxuu bixiyaa shaqooyin iyo fursado aad u fiican si aad u isticmaasho aqoontaada iyo xirfadahaaga. Haddii aad tahay qalin jabin ama heer kasta oo waxbarasho iyo tababar ah, waxaad ka faa'iideysan kartaa fursadaha UAE. Dubai, tusaale ahaan, waxay u oggolaaneysaa ajaanib badan in ay shaqo ku helaan si ay u kordhiyaan himilooyinka horumarinta. Tani waxay ka dhigan tahay in ajaanibtu leeyihiin fursad wanaagsan oo ay ku shaqeeyaan halkan iyo inteeda kale UAE iyada oo aan wax dhibaato ah. Ma jiri doonto tartan loogu talagalay shaqooyinka, maadaama ay dib ugu noqoto guriga sidaa daraadeed ha ka welwelin liiska dheer ee codsadayaasha iyo habka wax loo socodsiiyo. Waxaa ka mid ah shaqooyinka faa'iidada badan iyo xirfadaha dalbashada; falanqaynta tirakoobka, xidhiidhka caalamiga ah, naqshadeynta algorithm, macdanta macluumaadka, siyaasadda dadweynaha, naqshadaha webka, suuq geynta SEO / SEM, iyo UI designs
Haddii aad rabto inaad ka shaqeyso UAE; waxaa jira dhowr talaabo oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso. Burburinta suuqa shaqada Dubai ayaa u baahan aqoonta gobolka iyo dhaqaalaha raacsan. Arrimaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah; fiisooyinka, kafiilashada, iyo halka laga raadinayo talooyinka wareysiga. Waa kuwan waxyaabaha aad u baahan tahay si aad u hesho ka hor intaadan ka helin shaqadaada riyadaada ee Imaaraadka Carabta.
Helitaanka Visa Xuquuqda
U diyaargarowga shaqada ee UAE waxay u baahan tahay dukumentiyo ku habboon. Xaqiijinta dukumeentiyadaadu waa tallaabada ugu muhiimsan ee ku aaddan geeddi-socodkan. Fiisaha shaqada waa tikidhkaaga si aad u hesho xuquuqda iyo mudnaanta ama xaaladda shaqo. Tani waa shuruud muhiim u ah ajaanibta doonaya inay shaqo helaan. Waxaad soo gali kartaa Emirates booqasho ama dalxiis dalxiis laakiin waxaad u baahan doontaa inaad ku wareejiso xaaladaada fiisada markaad heshay shaqo. Inta badan ajaanibta ee Dubai lagama rabo inay qaataan fiiso ka hor intaanay iman. Waa inaad sidoo kale ka digto in dalkaaga asalkiisu uu door ka qaato go'aanka ka-dhaafitaanka. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah muwaadiniinta haysta fasax ah inay haystaan ​​fiisooyinkooda gudaha UAE maalmaha 90 waxaa ka mid ah;
Switzerland, Sweden, Spain, Slovenia, Slovakia, Romania, Portugal, Poland, Norway, Malta, Luxembourg, Lithuania, Liechtenstein, Latvia, Italy, Iceland, Hungary, Holland, Greece, Germany, France, Finland, Estonia, Denmark, Czech Republic, Cyprus, Croatia, Bulgaria, Belgium, iyo Austria. Kuwa kale uma baahna fiiso maalmaha 30 maalmood. Waxay ka mid yihiin; Kanadiyaan, Shiine, Australiyaan, Jabaan, Ruush, Irish, Ingriis, iyo Mareykan.
Ka shaqeyn la'aanta fiisada shaqo ee ku haboon waa khatar. Haddii la qabto, waxaad ku jiri doontaa dhibaato haddii aanad laheyn. Haddii kale, waxaa lagaa doonayaa inaad wadanka ka baxdo marka uu dhaco fiisadaada. Nasiib wanaag, markaad shaqo helayso, loo-shaqeeyahaagu wuxuu bilaabi doonaa habka fiisaha adiga oo sidaas darteed maaha inaad ka walwasho. Shirkaddu waxay qaadi doontaa hawsha. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad soo gudbisaa dukumintiyada rasmiga ah sida lambarkaaga baasaboorka si aad u bilowdo hawsha. Tani waa, si kastaba ha ahaatee, dhammaantood ma ahan inay qaadato fiisada shaqada.
Kaararka Caafimaadka iyo Shaqada
Inta lagu guda jiro howsha fiisadaada shaqo, waxaa lagaa rabaa inaad gudbiso diiwaannadaada caafimaadka. Dukumiintiyadan caafimaad waa inay la socdaan nuqulada baasaaboorrada, sawirrada, warqad shaqo iyo fiisaha. Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Caafimaadku waxay u baahan tahay in si buuxda looga taxadariyo gudbintaan kahor intaysan bilaabin fiisahaaga shaqo. Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad iska qaaddo baaritaannada dhiiga sida shardi uga ah Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Caafimaadka. Baaritaanku waa inuu meesha ka saaraa cudurada sida HIV / AIDs, Cagaarshowga C, iyo Qaaxada. Waqtigan xaadirka ah, ma jiro qof ajnabi ah oo cudurada keena oo loo ogol yahay inuu ku noolaado halkan. Kaliya marka aad gudubto imtixaannada waxaad heli kartaa kaarka caafimaadka, taas oo qasab ku ah shaqaalaha ajnabiga ah dhammaan Imaaraadka Carabta.
Kaadhka shaqada wuxuu u baahan yahay sawir baasaboor, qandaraaska shaqada, fiisaha gelitaanka, diiwaanka caafimaadka, iyo faahfaahinta loo shaqeeyaha. Faahfaahintan waa in la aqoonsadaa oo ay xaqiijisaa Wasaaradda Shaqada.
Waaxda socdaalka ee Dubai iyo Arrimaha Dibedda waa inay helaan fiisadaada deganaanshaha. Waxay u baahan yihiin inay joogaan qof ahaan si aad u buuxiso arjiga. Waxaad buuxin doontaa foomka oo waxaad soo gudbisaa dukumintiyadaada (shahaadada caafimaadka, rukhsadda gelitaanka, diiwaanka caafimaadka, sawirada baasaboorka, kaadhka shaqada iyo risiidh si loo xaqiijiyo kaadhkaaga kaarkaaga shaqada).
Iyada oo dukumiintiyadan iyo geeddi-socodba, waxaad diyaar u tahay inaad ka shaqeyso Dubai.
Si aad u hesho fikradda ballaadhan ee sida loo helo shaqooyinka, isticmaal Internetka. Halkan waxaad ku arki doontaa shirkadaha shaqaalaynta ee Dubai macluumaad aad u ballaaran oo faahfaahsan. Raadi boggaga ugu caansan ee lagu kalsoonaan karo si aad ula kulanto shaqada baahida iyo fursadaha fudud-dalbashada. Nooca khadka tooska ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isticmaasho ilaha ugu yar sida lacagta iyo waqtiga maxaa yeelay xafiisyo uma wareegi doontid. Aad bay ugu habboon tahay uguna hufan tahay in la isticmaalo ilaha internetka si aad uga hesho xiriiryo iyo fursado halkan ku yaal Dubai. Shirkaduhu waa dad daacad ah waxayna u maraan goobahooda si wanaagsan loo aasaasay, waxay qortaan ajaanib badan.
Dubai waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu helo shaqo. Laakiin kaliya si aad u hesho waxaa jiri doona dadaal badan iyo macluumaadka loo baahan yahay. Adiga oo ah shaqo raadiye, waxaad ubaahantahay inaad shaqo raadisid si aad ah u baara. Waxaad marwalba isticmaali kartaa shirkadeena si ay kaaga caawiso inaad shaqo ku hesho Imaaraadka Carabta. Iyo guud ahaan, wakhtigu waa furaha lagu helo shaqo Dubai. Sababtoo ah, haddii aad rabto in aad dibadda u guurto waxaad hubaal ka dhigan kartaa Dubai inay tahay meel lagu noolaado. Hope waxaad ku qori doontaa CV-gaaga boggayaga internetka, wakiilkayaga HR wuxuu kaa caawin doonaa inaad shaqo ka hesho Emirates.
Sidee baan ku caawin karnaa si aad shaqo u hesho?
Shirkaddayadu waxay bixisaa adeegga damaanada 100% ee shaqo raadintaada. Xaaladahaas oo kale, waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawinno inaad shaqo ka hesho Dubai. Kooxdayadu waxay caawimaan dhowr qaybood. Laga soo bilaabo shaqooyinka suuq-geynta ee Bariga Dhexe waaxda. Ilaa ilaa xirfadda bangiga ee UAE. Shirkadeena waxa ay ka caawineysaa xirfadleyda ka shaqeysa UAE.
Shirkadda Dubai City ayaa gacan ka geysatay qurbajoogta Bariga Dhexe. From Hindiya ilaa Dubai, laga bilaabo Pakistaan ​​ilaa Abu Dhabi. Waxaan halkan u joognaa inaan ku dhejino Imaaraadka Carabta. Sidaa darteed, ha wakhti wakhti wakhti iyo shaqo lagala helin shirkadeena.
Ka shaqeynta Dubai
Waxaan hadda ka caawineynaa in aan u soo bandhigno ajandayaal shaqooyinka Dubai
Soo hel a Shaqada Dubai? Waad ku faraxsan tahay sida aad xusuusta u heli karto shaqo riyada ah.
Sifudud Diiwaangelinta resume iyo bilaabi shaqo cusub Dubai!
Resume Resume ugu dhaqsaha badan Shirkadda Dubai gudaha UAE!
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa wax wanaagsan hagayaal ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go’aansadeen inay kudarsadaan macluumaad luqad kasta oo loogu talagalay duulimaadyadeena Dubai. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hadda ka heli kartaa hagitaanno, talooyin, iyo shaqo oo aad ka hesho Imaaraadka Carabta oo aad ku hesho luqaddaada.